Library | ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ
မမြင်ဖူး မတွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ စကားလုံး အသစ်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပြီလား။
‘အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်’၊ ‘သတင်းအတု’ နဲ့ ‘အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျခြင်း’ စတဲ့ စကားလုံးတွေ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေကို ဒီနေရာမှာ ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
‘အွန်လိုင်းပေါ်မှာ liveလွှင့်ခြင်း’ လိုမျိုး အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေ နှင့် ကိရိယာတွေ အကြောင်း ကို ရှာဖွေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့နေရာတွေမှာ လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်း တွေကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားပါတယ်။ အဲဒီ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လိုက်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့လည်း “ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ” နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုလေ့လာ သင်ယူ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စာကြည့်တိုက် ကို အင်တာနက်မရှိချိန်မှာ အသုံးပြုဖို့ နဲ့ print ထုတ်ဖို့ ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို မိမိ အလိုရှိရာအလုပ်တွေ ခိုင်းစေဖို့ တိတိကျကျ ညွှန်ကြားချက်တွေ ပေးထား ဖို့လိုပါတယ်။ ရိုးရိုးလေးပြောရရင်တော့ အယ်လ်ဂိုရစ်သမ် ဆိုတာ ဟင်းချက်နည်း အညွှန်း လိုမျိုး သင့်ကွန်ပျူတာက အလုပ်တာဝန်တွေ လုပ်နိုင်ပြီး လိုက်နာလို့ရအောင် အစီအစဉ်ချထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebookဆိုရင်လည်း အယ်လ်ဂို ရစ်သမ် ကို အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုး အတွက် အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
Facebook news feeds မှာ ဘယ်အကြောင်းအရာတွေ ပေါ်စေချင်လဲဆိုတာ ရွေးချယ် ပေးတာမျိုး။
သင် စိတ်ဝင်စားနိုင်မယ်ထင်တဲ့ အကောင့်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ အကြံပေး တာမျိုး။
သင့် ကြိုက်နှစ်သက်မှုပေါ်မူတည်ပြီး Facebook စာမျက်နှာ တွေကို အကြံပြု ပေးတာမျိုး။
အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ လင်ခ့်(link) တွေ၊ ဗိုင်းရပ် (virus) တွေ ဒါမှမဟုတ် ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပဲပို့လာသောစာများ (spam mail) တွေကို ဖော်ထုတ်ပေးတာမျိုး။
သင့်စိတ်ဝင်စားချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမယ့်၊ သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့် ကြော်ငြာတွေကို ပြသပေးတာမျိုး။
Anonymity – မည်သူမည်ဝါ မသိနိုင်ခြင်း
တချို့ အက်ပ်(App) တွေမှာ မည်သူမည်ဝါမှန်း မသိစေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ခွင့်ပြု ထားပါတယ်။ တချို့က အကောင့်တစ်ခုကနေ သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ပုံစံကို ဟန်ဆောင်ပြီး သော်လည်းကောင်း၊ နာမည်ဖော်ပြစရာမထားတဲ့အက်ပ် ကို သုံးပြီး သူတို့ မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်တယ်၊ ဘယ်နေရာက လာတယ် ဆိုတာကို တခြားအသုံးပြုသူတွေ မသိအောင် ကောမန့်(comment) ရေးတာသော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။တချို့အက်ပ် တွေက ရေးတဲ့သူဆီ စာပြန်လို့ မရအောင် ဖန်တီးထားတာတွေ လည်း ရှိပါတယ်။
ဘယ်သူဘယ်ဝါ မဖော်ပြထားတဲ့အတွက် တခြားလူတွေအပေါ် ထိခိုက်စေတဲ့အပြုအမူတွေ အလွယ်တကူ လုပ်လို့ရနိုင်တယ်။ တခြားတစ်ယောက်အဖြစ်လည်း ဟန်ဆောင် နိုင်တယ်။ ဒါကို အကောင့်အတု ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လိမ်လည်ခြင်း (catfishing) လို့ ခေါ်တယ်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါ မဖော်ပြထားခြင်းကို ခွင့်ပြုထားတဲ့ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကို အသုံးမပြုခင်မှာ သင့်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကို ထိခိုက်စေတဲ့၊ ဒုက္ခ ရောက်စေနိုင်တဲ့သူတွေကို ဘယ်လို တိုင်ကြားနိုင်သလဲ (report) နဲ့ ဘယ်လို ပိတ်ပင်ရမလဲ (block) ဆိုတာတွေကို သေချာသိထားဖို့လိုပါတယ်။
Applications – ‘Apps’ – အက်ပလီကေးရှင်းများ
အက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုတော့ အက်ပ် (App) လို့ပဲ များသောအားဖြင့် ညွှန်းဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ အက်ပ် ဆိုတာတွေက ဘယ် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်အမျိုးအစားမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အက်ပ်တွေကို စမတ်ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် တက်ဘလက်တွေပေါ် ဒေါင်းလုပ် လေ့ရှိပါတယ်။ စမတ်ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် တက်ဘလက် မျက်နှာ ပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ရုပ်ပုံလေးတွေကို နှိပ်ပြီး အက်ပ် တွေကို အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ အက်ပ် တွေက အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ဖုန်း၊ တက်ဘလက်တွေထဲမှာ တပါတည်း ပါတတ်တယ်။ (ဥပမာ – ပြက္ခဒိန်၊ ဂဏန်းတွက်စက်)။ တခြားသော အက်ပ် တွေကတော့ ဝယ်ယူရတာမျိုးနဲ့ ဒေါင်းလုပ်ချမှ ရတာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအများစုက သူတို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို စားသုံးသူတွေ အလွယ်တကူရယူစေနိုင်ဖို့ အက်ပ် ပုံစံဖန်တီး ပြုလုပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ – အွန်လိုင်းဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု အက်ပ် နဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ဈေးဝယ်နိုင်တဲ့ အက်ပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်အတော်များများ ကတော့ သူတို့ရဲ့ စမတ်ဖုန်းကနေ တဆင့် WhatsApp, WECHAT, Instagram နဲ့ Facebook လို လူမှုမီဒီယာအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ အက်ပ် တွေသုံးကြပါတယ်။
Blocking – ပိတ်ဆို့ခြင်း ခေါ် ဘလော့
လူမှုမီဒီယာဆိုက်နှင့် အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေ အပါအဝင် တခြားသူတွေနဲ့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ် ပြောဆိုနိုင်တဲ့ အက်ပ် နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ သင်နဲ့ တခြားသူတွေအကြား ဆက်သွယ်မှု ပြတ် တောက် သွားစေဖို့ သင့်ရဲ့ ပို့စ်တွေ၊ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မမြင်ရ အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒါကို (blocking) ပိတ်ဆို့ခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။
Block လုပ်နိုင်ခြင်းက အွန်လိုင်းလောကပေါ်မှာ သင့်ကို ပိုပြီး လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ သက်တောင့်သက်သာ ရှိနေစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအချက်တွေကို တွေ့ကြုံရမယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ တခြား တစ်ယောက်ကို block ဖို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသလား ဒါမှမဟုတ် လှောင်ပြောင် ရန်စခံနေရသလား။
အကောင့်အတုတွေကနေနဲ့ ကွန်ပျူတာက အလိုအလျှောက် ပေးပို့တဲ့စာတွေ (bots) ကနေ မလိုလားအပ်တဲ့စာတွေ၊ ကြော်ငြာတွေလက်ခံနေရသလား။
အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေ ကတဆင့် သင့်ကို ထိခိုက်နိုင်မယ့်၊ ညှာတာထောက်ထားမှုမရှိတဲ့ အပြုအမှုတွေ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြုလုပ်နေသလား။
သင်မသိတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီက မသင့်လျော်တဲ့ စာတွေ လက်ခံရနေသလား။
ဘယ်လို block ရတယ်ဆိုတာရယ်၊ block လုပ်ပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် တခြားသူတွေကမြင်ရလား၊ မမြင်ရတော့ဘူးလားကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုက်အသီးသီးမှာ စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်block လိုက်တဲ့သူတွေဆီ သူတို့ကို block လိုက်တဲ့အကြောင်း သူတို့ဆီ အသိပေးစာ ပို့မှာကို သင်စိုးရိမ်ကောင်း စိုးရိမ်ပါလိမ့်မယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ အဲလို အသိပေးလေ့ပေးထတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အကောင်းဆုံးကတော့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ပေါ်က ညွှန်ကြားချက်တွေကို အရင်ဖတ်ကြည့်ဖို့ ပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဝက်ဆိုက်တွေမှာ block လုပ်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
လူသိများတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပြီး အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ block ပြုလုပ်နည်းတွေကို ရှာဖွေကြည့်ပါ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဘယ်လို block ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်း တွေကို သင့်အနေနဲ့ တခြားတစ်ယောက်ကို ပြန်ရှင်းပြပေးနိုင်မလား ဆိုတာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း စကားလုံး တွေ သုံးပြီး ချရေးကြည့်ပါ။
Blog – ဘလော့ဂ်
ဘလော့ဂ် ဆိုတာကတော့ အကြောင်းအရာ အသစ်တွေ ပုံမှန်တင်ပေးနေတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် (website) ဒါမှမဟုတ် ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ (web page) ဖြစ်ပြီး လူတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် လူတစ်စုက ပုံမှန် စီမံခန့်ခွဲလေ့ရှိပါတယ်။ ဘလော့ဂ်တွေကို သာမန်စကားပြော ပုံစံမျိုးနဲ့ ရေးသားလေ့ ရှိကြပါတယ်။
ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ် တည်ထောင်နိုင်သလို ပြုလုပ်ရတာလဲအရမ်းကို လွယ်ကူ ရိုးရှင်း ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သင်စိတ်ဝင်စားရာ၊ ဝါသနာပါရာ အကြောင်းတွေကို အပျော် သဘောမျိုး ရေးသားတင်ပြနိုင်ပါတယ်။ တချို့လူတွေက သူတို့လို အလားတူ ပြဿနာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ သူတွေကို အချင်းချင်းပံ့ပိုးကူညီဖို့ ဘလော့ဂ် တည်ထောင် ကြပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းကိုတော့ တန်းတူအချင်းချင်း ကူညီပေးခြင်း လို့ ခေါ်ပါတယ်။
တစ်ခုသတိထားရမှာကတော့ ဘလော့ဂ်တိုင်းက ယုံကြည်စိတ်ချလို့ မရပါဘူး။ တချို့လူတွေက သူတို့ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို ခိုင်လုံတဲ့သက်သေ အထောက်အထား မပါရှိဘဲ ဖော်ပြ နေတာမျိုး လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ဘလော့ဂ်တွေမှာ အလွန်အကျူး အစွန်းရောက်ပြီး စိတ်ပျက်စရာ၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့ ရုပ်ပုံတွေ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ယုံကြည်ရတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲသိရဖို့ သတင်းအတုတွေအကြောင်း လည်း ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Browser – ဘရောက်ဇာ
Web browser ဆိုတာက အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ သတင်း အချက်အလက် တွေကို ရယူနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လူသိများတဲ့ browser တွေကတော့ Chrome၊ Safari၊ Firefox နဲ့ Microsoft Edge တို့ဖြစ်ပြီး သူတို့တွေကို Internet Explorer လို ကွန်ပျူတာမှာ တစ်ပါတည်းပါလာတဲ့ web browser နေရာမှာ အစားထိုး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ browser ကိုဖွင့်ပြီး ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွေ၊ ရုပ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က တခြား သတင်းအချက်အလက် တွေကို ရှာဖွေ ကြည့်ရှု နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Catfishing – အကောင့်အတု
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ မှာတော့ အကောင့်အတု ဆိုတာ တစ်စုံတစ်ဦး တခြားတစ်ယောက် အဖြစ် ဟန်ဆောင်တာကို ဆိုလိုတာပါပဲ။
ဥပမာ လူမှုမီဒီယာမှာ တခြားလူတစ်ယောက် ရဲ့ ဓါတ်ပုံတင်ပြီး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အတု၊ နာမည်အတုတွေနဲ့ ဟန်ဆောင်တာမျိုး အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တခါတလေမှာ လူတွေက အမုန်းစကားတွေ၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ စာတွေကို ဖြန့်ဝေဖို့ အကောင့်အတု သုံးပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မည်သူမည်ဝါမှန်း မသိအောင် နေကြတာလည်း ရှိပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်မသိတဲ့ လူတစ်ယောက်က အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သင်နဲ့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်ခွင့် တောင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မက်ဆေ့ချ်ပို့လာခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ သတိပြုရမှာကတော့ သူတို့အသုံးပြုထားတဲ့ နာမည်နဲ့ ဓါတ်ပုံက သူတို့တကယ်အစစ်မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။
တစ်ခါတလေ အကောင့်အတု လုပ်တဲ့သူက ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေသုံးပြီး သူ့ကို သူငယ်ချင်း အဖြစ် လက်ခံလာအောင် လှည့်စားတတ်ပါတယ်။
Cyberbullying – အွန်လိုင်းပေါ်အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျခြင်း
Cyberbullying ဆိုတာ အွန်လိုင်းကတဆင့် သူတပါးကို အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျတာ ဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်က တခြားတစ်ယောက်ကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ထိခိုက်စော်ကားတာ၊ ဒုက္ခပေးနှောက်ယှက်တောတွေ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင် အဲဒီလူကို အွန်လိုင်းပေါ်အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျတဲ့သူ လို့ခေါ်ပါတယ်။
Cyberbullying (အွန်လိုင်းပေါ်အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျခြင်း) နဲ့ Trolling (ထရိုး ခေါ် အွန်လိုင်းပေါ် ရန်စခြင်း) က အနည်းငယ်ကွဲပြားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီအသုံးအနှုန်း နှစ်မျိုးကို တစ်ခါတစ်ရံ ဖလှယ်ပြီးတော့လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
Cyberbulling လုပ်တဲ့သူတွေထဲမှာ သင်နှင့် အပြင်မှာသိတဲ့လူတွေ ပါဝင်လေ့ရှိပြီး တစ်ခါတလေ အပြင်မှာ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျတာနဲ့ပါ ဒွန်တွဲနေတတ်ပါတယ်။
Trolling ကတော့ သင်နဲ့တစ်ခါမှ မတွေ့ဆုံဖူးတဲ့လူက သင့်ကိုရန်စတာ ဒါမှမဟုတ် ငြင်းခုန်ဖို့ ဆွပေးတဲ့ ကောမန့်တွေ၊ မက်ဆေ့ချ်ပေးပို့တာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
သင်အနိုင်ကျင့်မခံရဘူးဆိုရင်တောင် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်ခံရမှုတွေ အကြောင်း သင်ယုံကြည်ရတဲ့ လူကြီးတစ်ဦးဦးကို အမြဲတမ်း အသိပေး တိုင်ကြားဖို့လိုပါတယ်။
အရမ်းကြောက်နေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် အရမ်းဝမ်းနည်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ကိုယ်စား တိုင်ကြား ပေးနိုင်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်ခံနေရရင် block လိုက်ဖို့ နဲ့ report လုပ်ဖို့ အတွက် လူကြီးတွေရဲ့ အကူအညီကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
Cyberbully လုပ်တဲ့သူကိုမက်ဆေ့ချ်များနဲ့ လုံးဝ မတုံ့ပြန်ပါနဲ့။ အဲဒီအစား report လုပ်ပါ။ အကူအညီ တောင်းပါ။
သင်ဖျက်ပစ်ချင်လောက်အောင် စိတ်မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာ စာဖြစ်နေရင်တောင်မှ သင်စိတ်ချ ယုံကြည်ရတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ကို သက်သေအထောက်အထား အဖြစ်ပြနိုင်ဖို့် သေချာ သိမ်းဆည်း စုဆောင်းပါ။
Digital footprint – ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာ
ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာ (Digital footprint) ဆိုတာက သင်အင်တာနက်သုံးတဲ့ခါ ကျန်ရစ်နေခဲ့တဲ့ အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ သင့်အွန်လိုင်းဂုဏ်သတင်းကို ပုံဖော်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Digital footprint မှာဆိုရင် သင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလိုက်တာ၊ ပို့စ် တင်လိုက်တာ၊ မျှဝေ လိုက်တာတွေ ပါဝင်သလို တခြားသူတွေ သင့်ကို တွဲပြီး ပို့စ်တင်တာ share တာ၊ သင့်အကြောင်းပို့စ်တင်တာ၊ share တာ တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာ ချန်ထားချင်တယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်းပေါ် ပို့စ်တင်တာ၊ like တာ၊ share တာတွေ မလုပ်ခင် သေချာဂရုစိုက်စဉ်းစားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
သင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ဘယ်အကြောင်းအရာမျိုးကိုမှ မချန် ထားခဲ့မိဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒါတွေက သင့်ရဲ့ အွန်လိုင်း ကျော်စောသတင်းကိုထိခိုက် စေနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ သင်ရဲ့ အပြောင်အပျက် ဒါမှမဟုတ် မသင့်တော်တဲ့ပုံတွေကို အများမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ပုံစံ (public) နဲ့ share ထားမိတယ်။ ဒါကို သင့် နာမည်နဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ရှာကြည့်လို့တွေ့နိုင်မယ်ဆိုရင် သင်ရဲ့ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ဒါမှမဟုတ် တချိန်မှာ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင် ဖြစ်လာနိုင်သူတွေလည်း ရှာတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာကို ကောင်းမွန်အောင် ထိန်းသိမ်းပါ။ သင့်ကို ထိခိုက်နိုင်စရာ၊ အရှက်ရစရာ ဒါမှမဟုတ် သင့်အကြောင်းတွေ အလွန်အကျွံဖော်ပြမိတာတွေ ရှိနေလားဆိုတာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သင့်နာမည်နဲ့ ရှာကြည့်ပြီး ရှိနေတယ်ဆိုရင် ဖျက်သင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ privacy setting ကိုလည်း ပြောင်းသင့် ပါတယ်။ ဒါမှ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး တခြားလူတွေက သင့်အကြောင်းကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှာတဲ့အခါ သင်ခွင့်ပြု သလောက်သာ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Digital resilience – ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာတွင် ကျင်လည်မှုရှိခြင်း
UK Council for Child Internet Safety (UKCCIS) Resilience Working Group က ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာတွင် ကျင်လည်မှုရှိခြင်း (digital resilience) ကို အခုလို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ထားပါတယ်။
“အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့် အခြေအနေများကို နားလည်ခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ခု မှားယွင်းသွားသည့်အခါ ဘာလုပ်ရမလဲသိခြင်း၊ အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံများမှ တဆင့် သင်ခန်းစာ ယူတတ်ခြင်း နှင့် မည်သည့်အခက်အခဲများ နှင့်စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာများ မဆို ကျော်လွှားနိုင်ခြင်း ဆိုတဲ့ စွမ်းရည်များရှိခြင်း”
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှာ ကျင်လည်တဲ့ သူဆိုတာ အောက်ပါအချက်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘယ်အခါမှာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်လည်းဆိုတာ နားလည်တယ်။
အကူအညီကို တောင်းခံဖို့ ဘာလုပ်ရလဲဆိုတာ သိတယ်။
Encryption –လျှို့ဝှက်သင်္ကေတ ပြောင်းခြင်း
Encryption (လျှို့ဝှက် သင်္ကေတပြောင်းခြင်း) ဆိုတာက သတင်းအချက်အလက်တွေကို တရားမဝင် ရယူခြင်းကနေ ကာကွယ်ဖို့အတွက် သင်္ကေတအဖြစ်ပြောင်းပေးတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဖြစ် ပါတယ်။ အသုံးပြုသူအချင်းချင်းသာ ဖတ်လို့ရအောင် သင်္ကေတအဖြစ် ပြောင်းလဲ ထားတဲ့စာတွေက သက်ဆိုင်ရာပေးပို့သူနဲ့ လက်ခံသူ သာလျှင် ဖတ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကောင်းကျိုးရော ဆိုးကျိုးပါရှိပါတယ်။
ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ ပေးပို့တဲ့စာက လျှို့ဝှက် သင်္ကေတနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုလုံခြုံပြီး စိတ်ချရတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ သတင်းနဲ့ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ သတင်းတွေပို့ဖို့အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ သက်ဆိုင်တဲ့အသုံးပြုသူအချင်းချင်းသာ ဖတ်လို့ရအောင် လျှို့ဝှက်ထားတာ ဖြစ်လို့ စိစစ်ထိန်းသိမ်းတာတွေ၊ ခြေရာခံတာတွေလုပ်လို့မရနိုင်တာကို အခွင့် ကောင်းယူပြီး သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ သတင်းအချက်တွေ ဖြန့်တာမျိုးလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Exploitation – အသုံးချခြင်း
အွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ တစ်ချို့သောသူတွေက အားနည်းတဲ့ တချို့လူတွေအပေါ် အခွင့်ကောင်း ယူပြီး သူတို့လိုချင်တဲ့အရာရအောင်လို့ အသုံးချကြတာတွေရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ အသုံးချခံရတဲ့ လူက ငယ်ရွယ်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်မယ်ဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ အရှက်ရစေပြီး ဝမ်းနည်းခံစား ရစေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အမှားကြောင့် မဟုတ်ရင်တောင်မှ သူ့ကြောင့် ဖြစ်ရတာလို့ ခံစားရစေ ပါတယ်။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အရှက်ရစရာ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ခံစားနေရရင် သင်ယုံကြည်ရတဲ့ လူကြီး တစ်ဦးဦးကို အသိပေးရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဖွင့်ပြောဖို့ခက်နေတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေရင်တောင် သင် report လုပ်ဖို့နဲ့ ပြဿနာတွေကိုကျော်လွှား နိုင်ဖို့ သင်ယုံကြည်ရတဲ့လူကို ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Facebook ဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံး လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာဖြစ်ပြီးတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အသုံးပြုသူစုစုပေါင်း သန်းနှစ်ထောင်ကျော် ရှိပါတယ်။
Facebook ပေါ်မှာ ပြုလုပ်နိုင်တာတွေကတော့
နှစ်သက်ရာ အဖွဲ့တွေ ဝင်လို့ရတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေ status တွေကို like လုပ်လို့ရတယ်။
Facebook Live ကနေတဆင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။
Facebook ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အသုံးပြုသူတွေ များသည်ထက်များစေချင်တာဖြစ်ပြီး အဲဒါကိုရဖို့ အလွယ်ဆုံးကတော့ ဝန်ဆောင်မှုကို အခမဲ့ ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Facebook က သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို ကြော်ငြာရှင်တွေကို ရောင်းချခြင်းအားဖြင့် ဝင်ငွေရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အချက်အလက်တွေလို့ဆိုရာမှာ သင် like လုပ်လိုက်တာတွေ သင်စိတ်ဝင်စားပြီးဖွင့်ကြည့်တဲ့ link တွေကအစ ပါပါတယ်။
ဥပမာ – သင်က အားကစားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို အမြဲတမ်း like နဲ့ share လုပ်မယ် ဆိုရင် အဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကြော်ငြာတွေပဲ facebook ပေါ်မှာ မြင်တွေ့လာရတာကို သတိထားမိမှာပါ။
အဲဒါကိုအခြေခံပြီး ကြော်ငြာရှင်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုကြော်ငြာတွေက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး လဲ ဆိုတာကို သိနိုင်မှာဖြစ်သလို သုံးစွဲသူအကြိုက်နဲ့ စိတ်ဝင်စားရာ ကို ဦးတည်ပြီး ရွေးချယ်ကြော်ငြာတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုမျိုးကို ရစေပါတယ်။
နောက်တခါ သင်အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါကျရင် သင့်ရဲ့ facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဘယ်လို ကြော်ငြာတွေ ပေါ်နေလဲဆိုတာ ရှာကြည့်ပါ။ ပေါ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ကြော်ငြာ အမျိုးမျိုး ကိုမှတ်သားထားပြီး သင်စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ ကိုက်ညီလားဆိုတာကို တိုက်ကြည့်ပါ။ သူတို့ကြော်ငြာတွေက သုံးစွဲသူ အကြိုက်နဲ့စိတ်ဝင်စားရာကိုလိုက်ပြီး ဦးတည်ကြော်ငြာတာ မျိုးဖြစ်တယ်လို့ သင်ထင်ပါသလား။
Facebook Messenger (သို့မဟုတ်)ရိုးရှင်းသည့် Messenger က Facebook အက်ပ်မှာပါတဲ့ စာပို့လို့ရတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်အစားထိုးထားတဲ့ မက်ဆေ့ချ့်ပဲသီးသန့်ပို့လို့ရတဲ့အက်ပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Messenger ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ထူးခြားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေလုပ်နိုင်ပါတယ်
၂.ပုံတွေ၊ စတေကာတွေ၊ GIF တွေနဲ့ အသံဖိုင်တွေပို့ခြင်း
၃. ဖုန်း (သို့မဟုတ်) ဗီဒီယို call လုပ်နိုင်ခြင်း
၄. သူငယ်ချင်းတွေကို ကိုယ့်တည်နေရာ share လုပ်နိုင်ခြင်း
၅. Messengerမှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း
၆. Messengerထဲကို app တွေ အများကြီးထည့်သုံးနိုင်ခြင်း
၇. Chat bot (chat စက်ရုပ်) လေးတွေနဲ့စကားပြောခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Fake news – သတင်းအတု
Fake news (သတင်းအတု) ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ကို မီဒီယာတွေနဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းတွေ ပြောတာ ကြားဖူးမှာပါ။ သတင်းအတု အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
ပထမသတင်းအတုပုံစံကတော့ တကယ်မဟုတ်တာတွေကို လူတွေတကယ်ထင်လာအောင် လုပ်ဇာတ်တွေ ရုပ်ပုံတွေကို တမင်သက်သက်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပုံစံတစ်မျိုးကတော့ အမြင်မှားအောင်လို့ သတင်းအမှန်နဲ့ အမှားရောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ဖြစ်တာ ဟုတ်မဟုတ် သေချာမစစ်ဆေးထားတဲ့သတင်းမှားမျိုးတွေ ဒါမှမဟုတ် စာရေးသူက အချက်အလက်တွေကို ချဲ့ကားရေးထားတဲ့သတင်းမျိုးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
သတင်းအတုဟုတ်မဟုတ် ဆန်းစစ်ရတာခက်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သတင်းအချက် အလက်တွေ အများကြီး ထွက်ပေါ်နေပြီး အဲဒီသတင်းတွေ တင်ဖို့နဲ့ ပြန့်သွားဖို့ က အရမ်းကို မြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နာမည်ကောင်းရှိတဲ့ သတင်းဌာနတွေတောင် မတော်တဆ မှားပြီး မယုံရတဲ့ သတင်းတွေ ကို ထုတ်ပြန်မိတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းတွေက အမှန်မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိသွားပြီး သူတို့ရဲ့ လူမှုမီဒီယာအကောင့်တွေ နဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေက ပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ် ဆိုရင်တောင် အဲဒီ သတင်းအမှားတွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ တခြားသူတွေကမြင်ပြီးသား၊ share ပြီးသားဖြစ် သွား တာမျိုး ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
အရာအားလုံးက အမြဲမမှန်ဘူးဆိုပေမဲ့ ဘယ်အရာတွေက အွန်လိုင်းပေါ်မှာယုံကြည်လို့ရ/မရ ဆိုတာကို ဆန်းစစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအချို့ရှိပါတယ်။အဲဒါတွေကတော့
ဒီအကြောင်းအရာကို တခြားနေရာတွေ၊ နာမည်ကောင်း ရှိတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာရော ထပ်မံဖော်ပြတာ ရှိလားကြည့်ရပါမယ်။
ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ရတာ ယုံချင်စရာကောင်းလား၊ တခြားနေရာတွေမှာရော ဖော်ပြထား သလား ဆိုတာ ဆန်းစစ်ရပါမယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သစ်ကုလားအုပ်ပန်းရောင်ကြီး လပေါ်ပျံနေတယ်ဆိုတဲ့ ပြုပြင်ထားတဲ့ပုံ ဆိုရင် တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ သာဓက ပေါ့နော်။
ထူးဆန်းတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာတွေဖြစ်နေလား။ဒါမှမဟုတ် တကယ့်လိပ်စာအစစ်လား။
သတင်း ဒါမှမဟုတ် ဆောင်းပါးကို ရေးတဲ့သူက ဘယ်သူဆိုတာသိလား။ ဒီသတင်းကို ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို ကြားဖူးပါရဲ့လား။
သတင်းကို ထုတ်ပြန်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတွေကို သင်သိပါသလား။ သူတို့က နာမည်ကောင်းရှိတဲ့အဖွဲ့ တွေလား။
မယုံကြည်ရဘူးလို့ထင်ရတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က နမူနာသတင်းတစ်ခုခုကိုရှာကြည့်ပါ။ အဲဒီသတင်းကို လူကြီးတစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောပြကြည့်ပါ။ သတင်းအမှန်ဟုတ်လား မဟုတ်လားဆိုတာကို ဘယ်လိုရှာနိုင်ကြောင်းပြောပြပါ။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့သတင်း ဒါမှမဟုတ် ယုံကြည်စိတ်ချလို့မရတဲ့ သတင်း ခြားနားချက်ကို ဆွေးနွေးပါ။
Fortnite ဆိုတဲ့ဂိမ်းကအခုအချိန်ထိ ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ လူငယ်များကြား အရမ်းကို ရေပန်းစား ပြီးတက်တက် ကြွကြွနဲ့ ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းအတွက် အခြေခံလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ ကလေး တွေလုံခြုံစွာကစားနိုင်ဖို့ လိုက်နာရမဲ့အချက်တွေ စီစစ်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Fortnite မှာဆို ကစားသူများအချင်းချင်းက အစစ်ကဲ့သို့ဖန်တီးထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှင်သန်နိုင်အောင် ညှိနှိုင်းကစားရပြီး တခြားကစားသမားတွေရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့သော် လည်းကောင်း ဂိမ်းကဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ သော်လည်းကောင်း တိုက်ခိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်တဲ့အရာတွေကို ကာတွန်းလိုပဲ ဆွဲထားပေမဲ့ တချို့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ပြကွက်တွေက ငယ်ရွယ်တဲ့ကစားသူတွေအတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Fortnite ကအခမဲ့ဖြစ်ပြီး PlayStation 4, Nintendo switch, XBox One, PC Mac, iOS နဲ့ အချို့ Android စသည့် စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအများကြီးမှာကစားလို့ရပါတယ်။
ကစားနည်းကရ်ိုးရှင်းပေမယ့် အရမ်းကိုစွဲလမ်းစေပါတယ်။ ကစားသူအများနဲ့ဆော့ရတဲ့ဂိမ်းတွေက မိနစ်သုံးဆယ် လောက်ကြာပြီး ကစားသူတွေကဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကိုအမြန်ပြန်ဝင်ဆော့လို့ရပါတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အကြာကြီး ဆော့လို့ရတာပါ။
ဒီဇိုင်းတွေက ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး အပတ်စဉ် အသစ်ပြုပြင်မွန်းမံမှုတွေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေရှိတဲ့အတွက် အမြဲဆန်းသစ်နေပါတယ်။
ကစားသူတွေကို စိန်ခေါ်မှုပြီးတိုင်း ဂိမ်းထဲကပိုက်ဆံ (V Bucks) က ဆုအဖြင့် ရပါတယ်။
ဒီဂိမ်းက YouTube, Twitch တွေလိုမျိုး ဗီဒီယို နဲ့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသနိုင်လို့ follower အရမ်း များအောင် လုပ်ပေးတဲ့ဂိမ်းဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်ကလေးတွေက မဆော့ရရင် အထီးကျန်သလို ခံစားကြရပါတယ်။
၁။ အကယ်လို့ အကောင့်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ ဖော်ပြမထားတဲ့ အကောင့်နာမည်ဖန်တီးထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီဂိမ်းမှာ အသက်အရွယ်နဲ့ စီစစ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ‌ဒါကြောင့်သင့်ကလေးအကောင့်ရှိရင်သော်လည်းကောင်း အကောင့်အသစ် ဖွင့်ချင်ရင် သော်လည်းကောင်း ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို သတိထားပါ။
၂။ Fortniteကလုံခြုံရေးအဆင့်သုံးဆင့်‌ပေးပါတယ်။ Public နဲ့ထားမယ်ဆိုရင် သင့်ကလေးရဲ့ အွန်လိုင်းအဖွဲ့ ထဲကို မည်သူမဆိုဝင်ကစားနိုင်တယ်။ Friend နဲ့ထားမယ်ဆိုရင် သူ့သူငယ်ချင်းတွေပဲ ဝင်လို့ရမယ်။ Private နဲ့ထားမယ် ဆိုရင်တော့ သင့်ကလေးကတခြားကစားသမား‌တွေကို မဖိတ်ခေါ်လျှင် ဘယ်သူမှသူ့အသင်းထဲ ဝင်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးနဲ့အဆင်ပြေမယ့် အဆင့်ကိုတိုင်ပင်ပါ။
၃။ Fortnite မှာ voice chat ပိတ်ထားလို့ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ရော၊ သင့်ကလေးပါ ဂိမ်း setting နဲ့ ရင်းနှီးအောင် လုပ်ပါ။ သင့်အနေနဲ့ မသင့်တော်ဘူးထင်ရင် voice chat ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။
၄။ သင့်ကလေးကို မလိုချင်တဲ့အဆက်အသွယ်‌တွေအကြောင်းပြောပြထားပါ။ အကယ်၍ တစုံတစ်ယောက်က သူတို့ကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းလာပြောရင် (သို့မဟုတ်) မသင့်တော်တဲ့ နည်းတွေနဲ့ ဆက်ဆံရင် (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်တွေလာမေးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြထားပါ။ အကယ်လို့ မလိုချင်တဲ့ အဆက်အသွယ် တွေ မသင့်တော်တဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မသေချာရင် သင့်ဆီကိုလာမေးခိုင်းပါ။
၅။ ကိုယ့်ကလေးနဲ့ တခြားကစားသူတစ်ယောက်ကြားမှာ မသင့်တော်တဲ့အဆက်အသွယ် တွေရှိနေပြီ ဆိုရင် ဘယ်လို တိုင်ကြားလို့ရသလဲ။
၆။ Fortnite ဂိမ်းရဲ့ main menu ထဲမှာ ဂိမ်းအတွင်း feedback ပေးတဲ့ ကိရိယာရှိပြီး မကောင်းတဲ့ အပြုအမူ ရှိတဲ့ ကစားသူတွေကို တိုင်ကြားလို့ရပါတယ်။ Fornite ထုတ်လုပ်သူ Epic games ရဲ့ website မှာလည်း သင်ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကို အီးမေးလ် ပို့တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ် ။
Child exploitation and online protection command (CEOP) ရဲ့ အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးစင်တာ ကနေလည်း အကြံအဉာဏ်တောင်းနိုင်သလို တိုင်ကြားလို့လည်းရပါတယ်။
Hacker – ဟက်ကာ
ဟက်ကာဆိုတာက သတင်းအချက်အလက်တွေကို တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ လူကို ခေါ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် သူတို့က သတင်းအချက်အလက်ရယူနိုင်တဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရှိတာ ကို ဆိုလိုပါတယ်။ လူမှုမီဒီယာအကောင့်၊ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဒါမှမဟုတ် လျှို့ဝှက် အချက်အလက် တွေကို ရအောင်လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဟက်ကာတွေက သူတို့လိုချင်တဲ့ အကောင့် ဒါမှမဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကနေ ပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုချက် မရှိပဲ သတင်းအချက်အလက်တွေရဖို့တွက် phishing scams (ကိုယ်ရေး အချက်အလက်လိမ်လည် လှည့်ဖြားယူတဲ့) နည်းကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
Hate speech – အမုန်းစကား
အမုန်းစကားဆိုတာက လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ မွေးဖွားရာဒေသ၊ လိင်စိတ်ဝင်စားမှု၊ မသန်စွမ်းဖြစ်မှု၊ ကျား/မဖြစ်မှု စတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေအပေါ် အခြေခံပြီး စကားလုံးနဲ့ လူတစ်ဦး ဒါမှမဟုတ် လူတစ်စုအပေါ် တိုက်ခိုက်တာကိုဆိုတာပါ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ပို့စ် တွေက အမုန်းစကားဖြစ်စေတဲ့ နမူနာ ပို့စ် လား ဆိုတာ အထူးသတိထားရမှာပါပဲ။ အဲလို တိုက်ခိုက်တဲ့ သဘောဆောင်တဲ့ ပို့စ် တွေဆို like နဲ့ share လုပ်တာရှောင်ရပါမယ်။ တစ်ခါတလေ အွန်လိုင်းပေါ်က ပို့စ် တွေကို အန္တရာယ်မရှိတဲ့ ဟာသတွေလို့ထင်ပြီး လူမှုမီဒီယာတွေကနေ share လုပ်မိတတ် ပါတယ်။ အမုန်းတရားတွေ ပွားများလာအောင်၊ လူတစ်စုအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်အောင် နှိုးဆွပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ကနေလာတဲ့ သတင်းတွေကို ဖြန့်ဝေခြင်းကနေ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်ကို စဉ်းစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
Instagram – အင်စတာဂရမ်
အင်စတာဂရမ်ဆိုတာ ဓါတ်ပုံတွေ မျှဝေလို့ရတဲ့ လူကြိုက်များပြီးကျော်ကြားတဲ့ အက်ပ် (app) တစ်ခုဖြစ်တယ်။ သင့်ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ နှင့် ဗီဒီယိုတွေကို တင်ခွင့်၊ မျှဝေခွင့်ပေးထားပြီး သင့်ရဲ့ profile ကို လူတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့ public နဲ့ထားတယ်ဆိုရင် သင့်အကောင့်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေ အပြင် တခြားဘယ်သူနဲ့ မဆို share လို့ရပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ တင်လို့ရတယ်။
အသဲပုံကိုနှိပ်ပြီးတော့ တခြားသူတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံကို like လုပ်လို့ရတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေကို ကောမန့် (comment)ပေးလို့ရတယ်။
ဟက်ရှ်တက်ဂ် (#) သုံးပြီး သင့်ဓါတ်ပုံတွေကို လူကြိုက်များအောင် လုပ်လို့ရတယ်။
Followers တွေရအောင်လုပ်နိုင်သလို ပြန် follow လုပ်လို့လဲရတယ်။
“Insta DMs” ကိုအသုံးပြုပြီး သင့် Followers တွေဆီ သီးသန့် မက်ဆေ့ချ် ပို့လို့ရပါတယ်။
Instagram Live ကိုသုံးပြီး live လွှင့်လို့လဲရပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Instagram story ကနေ ဓါတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေလဲတင်လို့ရပါတယ်။ Snapchat နဲ့တူပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ နာမည်ကျော်ကြားသူတွေကို အခကြေးငွေပေးပြီး Instagram ကနေတဆင့် သူတို့ရဲ့ Followers များဆီကို ကုန်ပစ္စည်း အသစ်တွေအကြောင်း ပြောပြခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကြော်ငြာနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သူတို့ကို အခကြေးငွေပေးပြီး ကြော်ငြာထားတာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြချက်တွေ၊ hashtag # တွေမှာ သေချာရှင်းလင်းအောင်ရေးသားထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီကြော်ငြာတွေက သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက် အစစ်အမှန်ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပါ။
Live Streaming – live လွှင့်ခြင်း။
Live streaming ဆိုတာက အင်တာနက်ပေါ်ကတဆင့် အချိန်နဲ့ တပြေးညီ တိုက်ရိုက် အသံလွှင့်တာ၊ ဗီဒီယို တိုက်ရိုက် ပြသတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ အင်တာနက်သုံးလို့ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဥပမာ – စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက် နဲ့ တိုက်ရိုက် live လွှင့်နိုင်တဲ့ platform လိုပါတယ်။
ဘာကြောင့် live လွှင့်တဲ့ အက်ပ် တွေက ရေပန်းစား တာလဲ
Live လွှင့်သူအနေနဲ့ ဖန်တီးသူ၊ အကြောင်းအရာတင်ပြသူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ အခွင့်အရေး ရနိုင်သလို နားထောင်ကြည့်ရှုသူ အများအပြား ရနိုင်တာကြောင့် live လွှင့်တာကိုလူကြိုက်များ ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အကြောင်းအရာကိုမဆို တစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင် အချိန်မဆိုင်းပဲ ထုတ်လွှင့်ပြသနိုင် လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Live လွှင့်လို့ရတဲ့ အက်ပ် တချို့ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
YouNow (Tik Tok, youtube, periscope)
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တိုက်ရိုက် live လွှင့်နိုင်ခြင်းက သင့်ကိုအစီအစဉ်မှာ ကျော်ကြားသူ တစ်ယောက် လိုမျိုး ဖြစ်စေပြီး သင့်ကို ပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သင့်အနေနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သိသာထင်ရှားဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ထိခိုက်မှုတွေရှိလာ နိုင်တယ်ဆိုတာကို သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်ကို ဘယ်သူတွေက ကြည့်နေလဲဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ live က ကြည့်သူများပြီး နာမည်ကျော်ကြားမယ် ဆိုရင်တော့ သင့် live ကို promote လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သင့် profile ကို အများမြင်နိုင်တဲ့ public နဲ့ ထားထားရင်သင်နဲ့ မသိသူတွေပါ ကြည့်လို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာတွေမြင်ရမလဲဆိုတာ သင်မသိနိုင်ပါဘူး။ တခြားသူတွေ live လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာ ရှေ့ဆက် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြိုတင်မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါက Live လွှင့်တာ ရဲ့ ပျော်စရာ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချက်ကြောင့်ပဲ သင့်အနေနဲ့ အန္တရာယ်တွေ၊ စိတ်ထိခိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို မြင်တွေ့စေနိုင်ပါတယ်။
ကြည့်ရှုသူတိုင်းက ညှာတာထေက်တားတတ်တဲ့သူတွေ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ ကြည့်ရှုတဲ့ လူတွေက သင် live လွှင့်နေတဲ့ တစ်လျှောက်လုံး သင့်ကို ကောမန့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရိုင်းစိုင်းတာတွေ မသင့်လျှော်တာတွေ ကောမန့် ပေးခံရနိုင်ပြီး သင့်အနေနဲ့ ဝမ်းနည်းတာ ကြောက်ရွံ့တာတွေဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်။
သင်ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာ လူတွေကိုသိစေတယ်။ သင်အနေနဲ့ live လွှင့်ရင်းနဲ့ ဘာတွေပြောပြမိနိုင်လဲ ဆိုတာသတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ သင်အိမ်နားကနေ ဒါမှမဟုတ် သင့်ကျောင်းဝတ်စုံဝတ်ပြီး Live လွှင့်မိတယ်ဆိုရင် သင့်နှုတ်ကထုတ်မပြောပေမဲ့ လူစိမ်းတွေကို သင်ဘယ်ကျောင်းတက်ပြီး ဘယ်မှာနေလဲဆိုတာ ထုတ်ပြောပြီးသား ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
Live လွှင့်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး နဲ့ ဆိုးကျိုးတွေအကြောင်း သင့် မိသားစု ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
Line ဆိုတာကစမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နဲ့ကွန်ပျူတာတွေကနေ မက်ဆေ့ချ်အပြန်အလှန်ပို့လို့ရတဲ့ အက်ပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Line အသုံးပြုသူအချင်းချင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မက်ဆေခ်ျ့၊ ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုနဲ့ အသံဖိုင်တွေ ပို့လို့ရပါတယ်။ Line အက်ပ်က အသုံးပြုသူတွေကို အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ခွင့်လည်းပေးပါတယ်။
Line အက်ပ်(app) မှာဆိုရင်
၂. ပို့ထားတဲ့ရုပ်ပုံ နဲ့ ဓါတ်ပုံ တွေရဲ့အရည်အသွေးကိုပြောင်းလို့ရတယ်။
၃. Line မိသားစုကပို့တဲ့စာတွေနဲ့ ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်။
၄. မတူညီတဲ့နည်းတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလက်ခံလို့ရတယ်။ ခေတ်စားတဲ့တစ်နည်းကဖုန်းကိုလှုပ်ပြီး သူငယ်ချင်း တွေလက်ခံတဲ့နည်းပါ။
၅. ဗီဒီယိုတွေကြည့်ဖို့၊ ဂိမ်းတွေဆော့ဖို့၊ အက်ပလီကေးရှင်း အသစ်တင်ဖို့ နဲ့ ဒေါင်းလော့ဒ် လုပ်ဖို့ အကြွေစေ့ တွေအလကားရနိုင်တယ်။
၆. Line ပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင် စတေကာတွေပြုလုပ်ပြီး စတေကာတွေကို Line တီထွင်သူများစျေးကွက်မှာ ရောင်းခြင်းဖြင့်လည်း ဝင်ငွေရနိုင်ပါတယ်။
၇. လူအများကြီးနဲ့ တစ်စုထဲဖုန်းခေါ်လို့ရပါတယ်။ တစ်ကြိမ်ထဲနဲ့ လူအယောက် ၂၀၀ထိ စကားပြောလို့ရတယ်။
၈. အချိန်သတ်မှတ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့chat‌ တွေကိုဖြတ်လို့ရတယ်။
၉. စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာကနေလည်း အွန်လိုင်းမက်‌ဆေ့ချ်တွေပို့လို့ရတယ်။
Moderation – စိစစ်ထိန်းသိမ်းမှုရှိခြင်း
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့ဆိုရင် အွန်လိုင်းပေါ်တင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စိစစ် ထိန်းသိမ်းဖို့လိုပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဒါမှမဟုတ် အက်ပ် ကနေတဆင့် တင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စစ်ဆေးထိန်းကြောင်း ပေးတဲ့လူကို စိစစ်ထိန်းသိမ်းသူ (moderator) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ စိစစ်ထိန်းသိမ်းသူရဲ့ အလုပ်က ဝက်ဘ်ဆိုက် ပေါ်မှာ မသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေ၊ အလွဲသုံးစား လုပ်တာတွေ၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတာတွေ နဲ့ တရားဥပဒေနှင့်မညီတာတွေကို ဖြန့်ဝေတာ မျိုးမလုပ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးတာပါ။
စိစစ်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွေရှိတဲ့ တချို့ အွန်လိုင်းနေရာတွေကတော့
လူမှုမီဒီယာ ဆိုက်များ (Facebook/Twitter စသည်ဖြင့်)
စိစစ်ထိန်းသိမ်းသူက များသောအားဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုက် ဒါမှမဟုတ် အက်ပ် တွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ အတိုင်း သုံးစွဲသူတွေက လိုက်နာတယ်ဆိုတာ သေချာအောင် ပုံမှန် စစ်ဆေးပေးတာ လုပ်ပါတယ်။ တချို့အခြေအနေတွေမှာ ကောမန့်နဲ့ ပို့စ်တွေက ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တာ၊ အန္တရာယ်ပြုတာ၊ ဒါမှမဟုတ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေကို ဖောက်ဖျက်တာတွေ လုပ်နေတယ်လို့ သုံးစွဲသူတွေက တိုင်ကြား(report) လာရင်လဲ စစ်ဆေးပေးပါတယ်။
စိစစ်ထိန်းသိမ်းသူက စစ်ဆေးပြီး ပို့စ် တွေက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုရင် အဲဒီ ပို့စ်ကို ပယ်ဖျက်ပေးပါတယ်။ ပို့စ် တင်တဲ့လူဆီကိုလဲ သူ့ရဲ့ ပို့စ် ကိုဖျက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း အသိပေးပါမယ်။ အဲဒီလူက ဆက်လက်ပြီး ကျူးလွန် နေမယ်ဆိုရင်တော့ ပို့စ် ထပ်တင်ခွင့်မရအောင် အပြီး ပိတ်ပင်တားမြစ်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
စိစစ်ထိန်းသိမ်းခြင်းက ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ အက်ပ် တွေလုံခြုံအောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးတာလဲ။
အမြဲတမ်း စိစစ်ထိန်းသိမ်းမှုရှိတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ အက်ပ်တွေကတော့ အပြုသဘောဆောင်ပြီး ဖေးမကူညီတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒါက စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့ သွေဖည်တဲ့ သူတွေကို အရေးယူမှုတွေ ဖြစ်အောင် ကူညီပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာရှိတဲ့လူတွေက နေ့ရက်တိုင်း၊ မိနစ်တိုင်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှိနေကြပြီး အွန်လိုင်းစိစစ်ထိန်းသိမ်းခြင်းအလုပ်ဟာလည်း ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ လူမှုမီဒီယာ ကုမ္ပဏီ အတော်များများက သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို စိစစ်ထိန်းသိမ်းဖို့ ဖိအားပေးမှု တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီး သူတို့တွေရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် တွေကို လုံခြုံစေဖို့ စိစစ်ထိန်းသိမ်းသူတွေကို ပိုမိုခန့်ထားဖို့ အာမခံကြရပါတယ်။ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ တဖြည်းဖြည်း များလာတာနဲ့ အမျှ စိစစ်ထိန်းသိမ်းမှု ပြုလုပ်ရာမှာ ခက်ခဲလာနိုင်ပါတယ်။
တချို့ လူမှုမီဒီယာ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကတော့ ထိန်းသိမ်းမှု မပြုကြပါဘူး။ ဆိုလိုတာက အသုံးပြုသူတွေအကြား ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ ကြီးကြပ်ပေးတဲ့သူ မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ တချို့ စာ (message) တွေကလည်း တခြားသူတွေ ဖတ်လို့မရအောင် အသုံးပြုသူ အချင်းချင်းသာ ဖတ်လို့ရတဲ့ သင်္ကေတတွေနဲ့ (encrypted) ပြုလုပ်ထားကြတယ်။ အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူတွေအကြား လုံခြုံစိတ်ချ ရအောင် စိစစ်ထိန်းသိမ်းတာတွေ မလုပ်တဲ့အခါ ဘာကိစ္စမဆို ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
နောက်တခါ နာမည်ကြီးတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဒါမှမဟုတ် အက်ပ် တွေကို သုံးတဲ့အခါ စိစစ်ထိန်းသိမ်းသူ ဒါမှမဟုတ် စိစစ်ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေ ဖော်ပြထားတာရှိလား ဆိုတာ ရှာကြည့်ပါ။
ပြီးရင် စိစစ်ထိန်းသိမ်းသူတွေကရော ထိန်းသိမ်းမှုကို တကယ် ထိထိရောက်ရောက်လုပ် နေတယ်လို့ ထင်လား၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ စတဲ့အချက်တွေကို သင့် သူငယ်ချင်းတွေ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
Mobile Legends: Bang Bang ဆိုတာက ဖုန်းတွေအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ အွန်လိုင်းစစ်တိုက်တဲ့ ကစားနည်း ဖြစ်ပြီး ကစားသူ တဖက်လျှင် ၅ ဦးစီဖြင့် ကစားရတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဖက် အသင်း ၂ ခုက တဖက် အသင်းရဲ့ ခံတပ်ကို သွားရောက်ဖျက်စီး ရသလို ကိုယ့်ရဲ့ ခံတပ်ကို ကာကွယ်တဲ့ ထိန်းချုပ်မှုလမ်းကြောင်းထား ရပါတယ်။ ထိန်းချုပ်လမ်းကြောင်း ၃ ခုရှိပြီး အထက်လမ်း ၊ အလယ်လမ်း၊ နဲ့ အောက်ခြေလမ်း ဆိုပြီးခေါ်ပါတယ်။ အားနည်းပြီးကွန်ပျူတာက ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဇာတ်ကောင် တွေကို minions လို့ခေါ်ပြီ အဲဒီဇာတ်ကောင်တွေက ခံတပ်ရဲ့ နယ်ရုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းကြောင်း ၃ ခုကနေဆန့်ကျင်ဘက်အသင်းရဲ့ခံတပ်ဆီသွားပြီး ရန်သူတွေ နဲ့ သူ‌တို့တွေရဲ့ခံတပ်တွေကို တိုက်ခိုက်ပါတယ်။
အသင်းတစ်ခုဆီမှာ ကစားသူ ၅ယောက်ရှိပြီး ပါဝင်သူတိုင်းက သူတို့ဖုန်းတွေကနေ သူတို့ ဖန်တီး ထားတဲ့ သူရဲကောင်း ဇာတ်ကောင်လေးတွေကို ထိန်းချုပ်ပါတယ်။ ၄င်းဇာတ်ကောင်က သေနတ်ပစ်သူ (marksman) ၊ လုပ်ကြံသူ (assassin) ၊ မျက်လှည့်ဆရာ (mage)၊ အကူအညီပေးသူ (support) ၊ တိုက်ခိုက်သူ (fighter)၊ အကာအကွယ် (tank) ဆိုတဲ့ ကွဲပြားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ၆ ခု ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်းဟာအရှေ့တောင်အာရှမှာလူကြိုက်များပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဝင် ဆုရပြိုင်ပွဲ ဖြစ်လာပါတယ်။
Netiquette – အင်တာနက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်
အင်တာနက် (internet) နှင့် ကျင့်ဝတ်ထုံးစံ(etiquette) ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ပေါင်းစပ်လိုက်ပါက အင်တာနက် ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်(netiquette) ဆိုတဲ့ စကားလုံးရပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘယ်လို ပြုမှုရမယ်ကို ညွှန်းဆို ပါတယ်။ အင်တာနက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာတာက သင်နဲ့ တခြား အင်တာနက် သုံးစွဲသူတွေအတွက်ပါ ကောင်းမွန်တဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်တွေ ကိုလိုက်နာတာ နဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ်ချင်းစာနာမှုကို ပြသတာ က ထပ်တူညီတယ် ဆိုတာ သင်သတိထားမိမှာပါ။ အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်တွေထဲမှာ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းကတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ တခြားလူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာနာ စိတ်ထားတာ နဲ့ ညှာတာထောက်ထားတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တခြားသူနဲ့ စကားပြောနေရင်းကနေ သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို သိဖို့ခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလွယ်တကူ နားလည်မှု လွဲနိုင်ပါတယ်။ သင်ကနေ ရယ်စရာလို့ ရည်ရွယ်ပြီး သင့်သူငယ်ချင်းတွေဆီပို့လိုက်တဲ့ မက်ဆေ့ချ်က သူ့တို့အနေနဲ့ရယ်စရာလို့ နားမလည်ဘဲ တကယ်လို့ ထင်သွားနိုင်တာကြုံဖူးပါသလား။
အင်တာနက်ပေါ်လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေကို မလိုက်နာကြပါပဲ တမင်တကာ တခြားလူတွေကို ထရိုး (troll) လုပ် ရန်စတာ၊ အမုန်းတရားတွေပါဝင်တဲ့ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ စာတွေပို့တာ၊ လူမှုမီဒီယာပေါ်မှာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ မှတ်ချက်တွေပေးတာ ဒါမှမဟုတ် သတင်းအတုတွေဖြန့်တာတွေ လုပ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ အဲလိုလူတွေနဲ့ကြုံရရင်တော့ တုံ့ပြန်တာ ဒါမှမဟုတ် ပြန်ဖြေတာတွေ မလုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ သင်ယုံကြည်ရတဲ့ လူကြီးတစ်ဦးဦးကို ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုပြောပြပါ။ သူတို့က သင့်ကိုကူညီပြီး report နဲ့ block လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အောက်ပါအချက်တွေကတော့ အင်တာနက်ပေါ်လိုက်နာရမဲ့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ ကျင့်ဝတ် တချို့ ဖြစ်ပြီး အဲဒါတွေက ပိုမိုကောင်းမွန်လုံခြုံပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အွန်လိုင်း အတွေ့အကြုံ ရစေပါတယ်။
သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တခြားလူတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယို တွေကို မတင်ခင်၊ မ shareခင် သူတို့ကို မေးမြန်းကြည့်ပါ။ သူတို့အတွက် အရှက်ရစေတာ ဒါမှမဟုတ် public နဲ့ မshare စေချင်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို တွေဟာ သူတို့အတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ဆိုတာကို နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် မတင်ခင်၊ မ share ခင် သူတို့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကို တောင်းသင့်ပါတယ်။
ဘာမှ မတင်ခင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ထိခိုက်နိုင်လား။ အရှက်ရစေလား ဒါမှမဟုတ် နစ်နာစေလားဆိုတာ အရင်စဉ်းစားပါ။ အဲလို စဉ်းစားရမယ့် အထဲမှာ ကျော်ကြားသူ တွေရဲ့လူမှုမီဒီယာ စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ကောမန့်တွေ ရေးတာလဲ ပါဝင်ပါတယ်။ သင်မသိတဲ့လူကို ထရိုး (troll) လုပ် ရန်စခြင်းကလည်း စာနာမှုမရှိတဲ့ အပြုအမှု တစ်ခုပါပဲ။
သတင်းအမှားတွေ ဖြန့်မိတာမျိုး မဖြစ်အောင် သတင်းအချက်အလက်တွေက သင့် အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတအရ မှန်ရဲ့လား။ ယုံနိုင်လောက်လားဆိုတာကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
သင်ရေးလိုက်တဲ့ အီးမေးလ်(Email), မက်ဆေ့ချ်၊ ကောမန့်တွေက ဘာအဓိပ္ပါယ် ဖော်ဆောင်နေလဲ ဆိုတာ ဂရုစိုက် စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ – သင့်ရဲ့ ဆရာဆီကို အင်္ဂလိပ်လို စာရေးတဲ့အခါ စာလုံးကြီး (Capital letter) နဲ့ရေးတာက သင့်က ရိုင်းစိုင်းစွာပြောတယ် ဒါမှမဟုတ် ဒေါသနဲ့ပြောတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက် စေပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အဲလို မရည်ရွယ်ဘူး ဆိုလိုဘူးဆိုရင်တောင် အဲဒီ အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက် နိုင်ပါတယ်။
သင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘာတွေလုပ်လေ့ရှိလဲ ဆိုတာစဉ်းစားပါ။ အင်တာနက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် တွေထဲက ဘယ်အရာတွေကို သင်လိုက်နာဖြစ်လဲ ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ မလိုက်နာနေဘူးဆိုရင် ဘာတွေကိုပြောင်းလဲချင်လဲ ဆိုတာကို သူငယ်ချင်း ဒါမှမဟုတ် မိသားစုတွေနဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
Online empathy – အွန်လိုင်း ပေါ်မှာ ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်ခြင်း။
ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုတာ တခြားသူတွေအပေါ် သင်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာ သိရှိခြင်း နဲ့ သင်ပြောဆိုမှု၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ် သူတို့ ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာကို နားလည်ခြင်း ဖြစ်တယ်။
ဥပမာ တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့အတွက် မကောင်းတဲ့ အရာတွေဖြစ်နေသလိုခံစားရပြီး ခက်ခဲတဲ့ အချိန်တွေ ဖြတ်သန်းနေရမယ်။ သင့်အနေနဲ့ သူဘာကြောင့် အဲလိုမျိုး ခံစားနေရလဲဆိုတာကို နားလည်တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိသူပါ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ချင်းစာနာမှုကို ပြသရာ ရောက်ပါတယ်။
ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်ခြင်းနဲ့ ကရုဏာသက်ခြင်းက မတူပါဘူး။ ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုတာက သင့်က သူတို့နေရာမှာ ဝင်ရောက်ခံစားတာ ဖြစ်ပြီး ကရုဏာသက်တယ် ဆိုတာက တခြားတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်တာထက် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေအပေါ် အလေးထားတယ် ဆိုတာကို ပြသတာပါ။
ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်ခြင်းက အွန်လိုင်းလောကအတွက်အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းပါ။ ဥပမာ- Snapchat, Instagram လိုမျိုး အက်ပ် တွေသုံးနေတဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားပြောနေချိန်၊ ဂိမ်းဆော့နေချိန်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက် တွေသုံးနေချိန် နဲ့ မက်ဆေ့ချ် ပို့နေချိန်တွေမှာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ရှိဖို့လိုပါတယ်။ သူတစ်ပါးနေရာမှာ မျှဝေခံစားဖို့ အရေးကြီးသလို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ပြောဆိုတာတွေ၊ ပြုလုပ်တာတွေ မလုပ်ခင် သေချာစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ်ချင်းစာနာမှုကို ဘယ်လိုထားရှိလို့ရသလဲ
အထူးသဖြင့် တခြားသူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောမန့် မပေးခင်နဲ့ မက်ဆေ့ချ် မပို့ခင်မှာ စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ လူကိုယ်တိုင်တွေ့ရင်ကော အဲလို ပြောမှာလား။ သင်ပြောသလို သင့်ကိုတခြားတစ်ယောက်က ပြောမယ်ဆိုရင်ရော သင်ဘယ်လို ခံစားရမလဲ။
အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ဗီဒီယို သို့မဟုတ် ဓါတ်ပုံ မဖြန့်ဝေခင် စဉ်းစားပါ။ တခြားလူကို ဝမ်းနည်းစေတာ၊ ဒေါသဖြစ်စေတာ၊ အရှက်ရစေတာ ဒါမှမဟုတ် ထိခိုက်တာတွေ ဖြစ်စေလား။ သင့်တော်ရဲ့လား။ ဒီဗီဒီယိုကို လူဘယ်နှစ်ယောက်က မြင်နိုင်လဲ၊ Share လုပ်နိုင်လဲဆိုတာရော သတိထားမိရဲ့လား။
ချိုသာသိမ်မွေ့ပါစေ။ သင်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အရာတွေက တခြားတစ်ယောက်အတွက် မကောင်းတဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်စေလား၊ သူတို့ဘယ်လိုခံစားသွားစေနိုင်လဲ။ သင်ပြောဆို ပြုမူလိုက်တာတွေက သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှု အပေါ်တောင် သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေနိုင် ပါတယ်။
တခြားတစ်ယောက်က အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျနေရင် ဝင်မပါပါနဲ့။ ယုံကြည်ရတဲ့ လူကြီးတစ်ဦးဦး ကို ပြောပြပြီး မတရားမှုအတွက် report လုပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့ လူတွေနဲ့ အပြန်အလှန် မပြောဆိုပါနဲ့။
တစ်စုံတယောက်က သင်တင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကို ပြန်ဖြုတ်ပေးဖို့ပြောလာရင် ပြန်ဖြုတ် ပေးလိုက်ပါ။ တခြားတစ်ယောက်က သင်လုပ်သလို သင့်ကိုလုပ်ရင် ဘယ်လို ခံစားရမလဲ ဆိုတာကို နားလည်ပါ။
သင့်ကိုယ် သင်လဲညှာတာပါ။ သတိရဖို့က လူတိုင်းရဲ့ ဘဝတွေက လူမှုမီဒီယာမှာ ဖော်ပြထားသလို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပြီး ပြည့်စုံနေတယ် ဆိုတာမရှိပါဘူး။ တခြားလူတွေရဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်နေရင်းက သင်ဝမ်းနည်းလာမယ် ဒါမှမဟုတ် အားကျမနာလိုတာတွေဖြစ်လာရင် ကြည့်နေတာတွေရပ်လိုက်ပါ။ လူတွေက သူတို့ အကြောင်း၊ သူတို့ဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေဖော်ပြမလဲ ဆိုတာကို ရွေးချယ် ဖော်ပြ လေ့ရှိပြီး သူတို့မြင်စေချင်တဲ့ ပုံရိပ်ဖြစ်အောင် ပြုပြင် စိစစ်တတ်ကြတယ် ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
နောင်တစ်ချိန် သင်အွန်လိုင်းသုံးတဲ့အခါ ညှာတာထောက်ထားခြင်း ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ချင်းစာနာခြင်း ကို ဖော်ပြနိုင်မယ့် အကြောင်းအရာတစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူငယ်ချင်းဆီကို အပြုသဘော ဆောင်ပြီး အားပေးချီးမွမ်းတာ ဒါမှမဟုတ် ရယ်မောပျော်ရွှင်စေတဲ့ မက်ဆေ့ချ် ပို့တာမျိုး တစ်ခုခုပေါ့။
Online reputation – အွန်လိုင်းကျော်စောသတင်း
သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းကျော်စောသတင်း ဆိုတာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သင့်အကြောင်းရှာကြည့်လျှင် ဘယ်သူ မဆိုတွေ့နိုင်တဲ့ သင့်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းအရာထဲမှာ သင် public (လူတိုင်းမြင်နိုင် တဲ့ပုံစံ) နဲ့တင်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေ၊ လူတိုင်းတွေ့နိုင်အောင် လူမှုမီဒီယာပေါ်မှာ share ထားတဲ့ ပို့စ်တွေ၊ တခြားသူ share ထားတဲ့ သင်ပါဝင်တဲ့ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေပါဝင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းကျော်စောသတင်း နဲ့ သင်ချန်ထားတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာတွေကို စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။
တခြားလူတွေက အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ သင့်အကြောင်းပြောတာတွေ share တာတွေကို ထိန်းချူပ်ဖို့ ခက်တာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သင်ဘာကို public နဲ့ တင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ သေချာ စဉ်းစား လို့ ရပါတယ်။
လူတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့ပုံစံ (Public) နဲ့ ပို့စ် မတင်ခင် စဉ်းစားရမှာက အဲဒီ ပို့စ်ကို သင့်မိဘတွေနဲ့ သင့်ဆရာတွေမြင်သွားရင် သင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာပါပဲ။ တခြားတစ်ယောက်ယောက် က မြင်ရင်ကော သင်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ပါသလား ဆိုတာလဲ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
Passwords – လျှို့ဝှက်စကားလုံး
လျှို့ဝှက်စကားလုံး (Password) ဆိုတာ သင့်ရဲ့ ကာကွယ်ထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက် ဒါမှမဟုတ် အကောင့် ထဲဝင်လို့ရအောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်စာလုံး၊ စာစု ဒါမှမဟုတ် ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ စာလုံးစု တွေကိုခေါ်ပါတယ်။
ခိုင်မာတဲ့ Password ဆိုတာ က လုံခြုံစိတ်ချရပြီး အလွယ်တကူ ခန့်မှန်းလို့မရပါဘူး။ ဒါမှလဲ အွန်လိုင်းပေါ်က သင့်အချက်အလက်တွေကို သီးခြားထားရှိပြီး ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။
မတူညီတဲ့ အကောင့်တွေအတွက် မတူညီတဲ့ လျှို့ဝှက်စကားလုံးဖန်တီးထားပါ။
ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ အက္ခရာတွေ၊ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအကြီးအသေး(capital နဲ့ small letter)တွေကို ရောပြီးအသုံးပြုပါ။
သင့်ရဲ့နာမည် ဒါမှမဟုတ် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် နာမည်လို သိသာထင်ရှားတဲ့ စကားလုံး တွေမသုံးပါနဲ့။
သင့်မွေးနေ့၊ အသက် ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်လို သိသာထင်ရှားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းနံပါတ် တွေ မသုံးပါနဲ့။
စကားလုံးတစ်လုံးအစားဘယ်သူမှခန့်မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ စကားစုအတိုလေးတွေ ကိုစဉ်းစားပါ။
အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းကိုတောင် သင့် ရဲ့ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို မပြောပါနဲ့။
အပေါ်ကဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့ သင့်အနေနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ လျှို့ဝှက်စကားလုံး တွေရှိလားဆိုတာ ဆန်းစစ်ပါ။ အွန်လိုင်း အကောင့် တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်စကားလုံး (Password) ပြောင်းဖို့ အခုအချိန်က အကောင်းဆုံးပါ။ Password ကလည်း သင်တစ်ယောက်ထဲပဲ သိတာ သေချာပါစေ။
Peer-to-peer – တန်းတူအချင်းချင်း
တန်းတူအချင်းချင်းပံ့ပိုးကူညီခြင်းဆိုတာ လူတွေကသူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံပြီး တခြားသူတွေကိုသော်လည်းကောင်း သူတို့ကိုယ်သူတို့သော်လည်းကောင်း ကူညီပေးတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ တူညီတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေက သင်ခံစားနေရတာတွေကို သိမြင် နိုင်ပြီး သူတို့တုန်းက အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် အတက်ရောဂါရှိနေတဲ့လူတစ်ဦး က အဲဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘလော့ဂ် (blog) တစ်ခုရေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး တခြားလူတွေကို share မယ်၊ ကူညီမယ်။ အတက်ရောဂါနဲ့ နေ့စဉ် ဘယ်လိုနေထိုင်နေသလဲဆိုတာကို နေ့စဉ် Vlog (ဗီဒီယို blog) ပြုလုပ်မယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ တခြားလူတွေရဲ့ မှတ်ချက်ကောမန့်တွေကို ပြန်ဖြေပေးမယ်၊ ဘယ်နေရာတွေမှာ ပံ့ပိုးကူညီမှု ရနိုင်လဲဆိုတာ ညွှန်ပြပေးမယ်၊ အကြံဉာဏ် အချက်အလက်တွေမျှဝေပေးမယ် ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပိုပြီး နေကောင်းလာအောင် ကူညီပေးတာကိုဆိုလိုပါတယ်။
အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တခြားလူတွေကို share နိုင်ခြင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဥပမာ – blog သို့မဟုတ် Vlog တွေကို စိစစ်ထိန်းသိမ်းဖို့်ခက်ခဲပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာပါတဲ့ တချို့သတင်းအချက်အလက်တွေက အထင်မြင်မှား စေတာတွေ ထိခိုက်နစ်နာစေတာတွေ နဲ့ အချက်အလက် မှားနေတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်က သင်မြင်တဲ့ ဖတ်တဲ့ အရာရာတိုင်းက မမှန်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါတလေ တန်းတူ အချင်းချင်းပြောတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အရမ်းကောင်းနေနိုင်ပြီး ပုံမှန် စွဲစွဲမြဲမြဲ အားပေး ဖတ်ရှုသူတွေအတွက် အရမ်းလိုအပ်တဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအကြောင်းအရာ တွေက တွေးစေချင်တဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း တွေးလာအောင် ဒါမှမဟုတ် ထိခိုက်နစ်နာအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ဘက်လိုက်တဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ‘ဆန်းစစ် ဝေဖန်ပိုင်းခြား တွေးခေါ်နိုင်မှု’ ကို ပျိုးထောင်တာဟာ အရေးပါပါတယ်။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင် သင်ဖတ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာက မှန်လား မှားလားဆိုတာ သင့်ကိုယ်သင် ပြန်မေးဖို့လိုပါတယ်။ ပြောနေတာတွေက ယုတ္တိရှိရဲ့လား။ အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိလား။ ဒါဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာ သင်မြင်တဲ့ ဘယ်အရာမဆို၊ ရေးသားထား တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ အွန်လိုင်း ကောလာဟလတွေ၊ ပျံ့နှံနေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ အားလုံး အကျုံးဝင်ပါတယ်။
တန်းတူအချင်းချင်းပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးကို ချရေးကြည့်ပြီး တခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို အဲဒီအကြောင်းရှင်းပြပါ။
Personal information – ကိုယ်ရေးအချက်အလက်
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ သင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့ပုံစံ (public) နဲ့ share တာက အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆို သင်နဲ့မသိတဲ့ သူစိမ်းတွေလည်း သင့်ရဲ့အချက်အလက် တွေ့သွားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့
နာမည်အပြည့်အစုံ နဲ့ မွေးနေ့
Share ရင်လည်း အန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ဘူးလို့ ယူဆလို့ရတဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ
သင့်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ် ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ရှင်
သင်အွန်လိုင်း အသုံးပြုနေချိန်မှာ အရေးကြီးတာကတော့ ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေကိုတော့ လျှို့ဝှက်ထားမယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ ဒါမှလဲ အွန်လိုင်းပေါ်က သူစိမ်းတွေအနေနဲ့ သင့်အကြောင်းကို အများကြီး ရှာလို့မတွေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု အရေးကြီးတာက သင့်သူငယ်ချင်းရဲ့ဓါတ်ပုံ ဒါမှမဟုတ် သင့်သူငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် သူတို့ပါတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို မတင်ခင်၊ မ share ခင်နဲ့ tag မလုပ်ခင်မှာ သင့်သူငယ်ချင်းတွေဆီမှာ ခွင့်ပြုချက်တောင်း ကြည့်ဖို့က အရေးကြီး ပါတယ်။
Phishing – ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လိမ်လည်လှည့်ဖြားယူခြင်း။
Phishing ဆိုတာက လူလိမ်တွေက သင့်ကိုလှည့်ဖျားပြီး သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ (ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်၊ လျှို့ဝှက်စကားလုံး(password) နှင့် အကြွေးဝယ်ကတ်နံပါတ်) တွေကို ပေးအောင် ကြံစည်အားထုတ်တာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကြိုးပမ်းလေ့ရှိလဲဆိုရင် သင်တခါမှမဝယ်ဘဲနဲ့ သင်ဝယ်ထားတာတွေ သေချာအောင် စစ်ဖို့အတွက် ဆိုပြီး သင့်ရဲ့ အကြွေးဝယ်ကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို အီးမေးလ် ကနေတဆင့် တောင်းတာ ဒါမှမဟုတ် အင်တာနက်သုံးနေတုန်း pop-up မက်ဆေ့ချ်တစ်ခု ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီး သင့် ဖုန်းအသစ်တစ်လုံး မဲပေါက်တယ်လို့ ပြောပြီး ဆုထုတ်ယူဖို့တွက် သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေး အချက်အလက်တွေ တောင်းတာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ Phishing နည်းတွေက တကယ့်အစစ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ မရိုးသားကြံစည်သူ ကနေ တစ်ခါတလေ သင်တကယ်အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကိုယ်စား ဟန်ဆောင်ပြီး သင့်ဆီကို စာရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မက်ဆေ့ချ်တွေ အီးမေးလ်တွေကို သေချာစွာစစ်ဖို့ အရေးကြီးပါ တယ်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်လိမ်ယူတာ ဟုတ်/မဟုတ် သင်အဖြေရှာရာမှာ လွယ်ကူစေဖို့ နည်းလမ်းတွေ ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက သင့်ရဲ့ လျှို့ဝှက်စကားလုံး(password) ကို မတောင်းပါဘူး။
သင့်က ဘယ်ပြိုင်ပွဲမှ မဝင်ထားဘဲနဲ့ သင်ဆုရတယ်ဆိုတဲ့ pop-up မက်ဆေ့ချ် ရုတ်တရက် ပေါ်လာတယ် ဆိုရင် ဒါဟာ လိမ်လည်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အီးမေးလ် ပို့လာသူရဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာကို သေချာစွာစစ်ပါ။ သင်အကောင့် ရှိနေတဲ့ ကုမ္ပဏီအစစ်ကနေ လာတာအဖြစ် ဟန်ဆောင်ရင်တောင်မှ အယောင်ဆောင် လိမ်ညာတဲ့သူတွေရဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာတွေက ထူးဆန်းတဲ့ နံပါတ်တွေ၊ စကားလုံးတွေပြည့်နေပြီး တရားဝင်ကုမ္ပဏီ ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့ မတူပါဘူး။
အွန်လိုင်းပေါ်ကနေလည်း တရားဝင်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ရှာကြည့်ပြီး နောက်တခါ စစ်ဆေး ကြည့်ပါ။
လိမ်လည်အချက်အလက်ယူတဲ့ ဘယ်အီးမေးလ် ကိုမဆို အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူဆီကို report လုပ်ပါ။ လိမ်လည်အီးမေးလ် ပေးပို့သူကိုလည်း block လုပ်ပါ။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လိမ်လည်ရယူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မသိတဲ့ သူငယ်ချင်း ဒါမှမဟုတ် မိသားစုဝင် တစ်ယောက်ယောက်ကို ရှာပြီး ရှင်းပြပါ။ အဲလိုလိမ်လည်တာတွေကို ဘယ်လို သိနိုင်သလဲ။ တွေ့ကြုံခဲ့ပါက ဘာတွေလုပ်သင့်/ မလုပ်သင့် ရှင်းပြပါ။
Photo sharing – ဓါတ်ပုံမျှဝေခြင်း။
လူမှုမီဒီယာတိုင်း နဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်(website) တိုင်းလိုလိုက အသုံးပြုသူတွေကို သူတို့ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ တစ်လောကလုံးဆီ မျှဝေဖို့အတွက် အားပေးကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ ဆယ်ဖီ (Selfie) ပုံတွေအပြင် မိသားစုပုံတွေအထိ အားလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကို ကမ္ဘာကြီးက မြင်စေချင်တဲ့ သင့်ပုံရိပ်ကို လူမှုမီဒီယာတွေက ဖန်တီးပေးခြင်းပါပဲ။
သင်တင်လိုက်တဲ့ အချို့ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေက ၂၄ နာရီကျော်ရင် ပျောက်သွားမယ်လို့ တချို့ အက်ပ်တွေက ကတိပေးကြပါတယ်။ အဲဒါမှန်ပေမဲ့ တချို့ လူတွေက ဓါတ်ပုံကို စကရင်ရှော့ (screenshot) ယူပြီး သိမ်းထားနိုင်တာကိုတော့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမထားပါဘူး။ သင့်ရဲ့ အရှက်ရစရာပုံ ဒါမှမဟုတ် မသင့်တော်တဲ့ပုံတွေကို စကရင်ရှော့ယူထားတာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေက ဓါတ်ပုံ ယူထားပြီး ဘာလုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာမပြောနိုင်ပါဘူး။ အက်ပ်တွေက ဓါတ်ပုံတွေ ပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ ပြောထားသည့်တိုင်အောင် အက်ပ်ရဲ့ အပြင်ဖက်မှာလည်း ကိုယ့်ဓါတ်ပုံတွေ ရှိနေနိုင်တာကြောင့် သတိထားဖို့လိုပါတယ်။
Photoshopped – ဓါတ်ပုံပြင်ခြင်း။
တစ်စုံတစ်ယောက်က ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို ဖိုတိုရှော့ ထားတယ်လို့ ပြောတာဟာ ဓါတ်ပုံတည်းဖြတ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြစ်တဲ့ photoshop နဲ့ဓါတ်ပုံကို ပြုပြင်ထားတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဖိုတိုရှော့ထားတဲ့ ပုံဆိုတာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့ ပြောင်းလဲ တည်းဖြတ်ထားတဲ့ (Filter and change features) ပုံပါ။ ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပြီး မော်ဒယ်တွေရဲ့ပုံတွေကို အကောင်းဆုံး ပုံရိပ်အဖြစ် တွေ့ရအောင် ပြုပြင်ဖန်တီးထားကြပါတယ်။ အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင် သူတို့ပုံတွေကို ကွဲပြားသွားအောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တည်းဖြတ်လို့ရတဲ့ အခမဲ့ အက်ပ် များစွာရှိပါတယ်။ ဒါဟာ မိမိ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် ယုံကြည်မှုရှိခြင်း နဲ့ မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားခြင်းတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာ ဖြစ်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်တွေ့မရနိုင်တဲ့ အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ လှပတဲ့ပုံတွေကို ဖန်တီးပြီး ဓါတ်ပုံတွေကို ပြုပြင်ထားတယ်ဆိုတာ လူတွေ မသိဘူးဆိုရင်ပေါ့။
Pop-ups – ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့စာများ။
တစ်ခါတလေ တချို့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို ဖွင့်တဲ့အခါ စကရင် မျက်နှာပြင်မှာ အကွက် သေးသေးလေး နဲ့ စာတွေ ရုတ်တရက် (Pop-up) ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ Pop-up ဖြစ်လာတဲ့ စာတွေက ထုတ်ကုန် နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ကြော်ငြာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ အချက်အလက် လိမ်လည်ယူချင်တဲ့ အတွက် မယုံနိုင်လောက်အောင် ကောင်းတဲ့ ဆုရတယ်ဆိုပြီး သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက် တွေကို ဖြည့်ခိုင်းတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲလိုရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ လင့်ခ်(Link) တွေက စိတ်မချ ရတာ ဒါမှမဟုတ် အလိမ်တွေ ဖြစ်နိုင်လို့ မနှိပ်မိဖို့လိုပါတယ်။ Pop-up အကွက်ရဲ့ ညာဖက် အပေါ်ဒေါင့်က (x) ကိုနှိပ်ပြီးပိတ်လို့ရပါတယ်။ အဲလို့ ပိတ်လို့ရတဲ့ အကွက်ကရော အတုလား ဆိုတာကိုတော့ သေချာကြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ Pop-up ကို အတုပိတ်ခလုတ်နှိပ်မိရင် သင်အသုံးပြုနေတဲ့ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ တက်ဘလက်တွေကို virus ကူးနိုင်တဲ့ တခြား ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွေ၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ လင့်ခ်တွေ ဆီကိုရောက်သွားနိုင်လို့ပါ။ Pop-up တွေအများကြီးပါတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်က ယုံကြည်စိတ်ချလို့ မရဘူးဆိုတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Privacy – ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
သင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့အချိန်မှာ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တွေကို ကာကွယ် ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်အရာတွေက လူတိုင်း မြင်နိုင်တဲ့ ပုံစံ(Public) နဲ့ တင်လို့ share လို့ရလဲ၊ ဘယ်အရာကတော့ ဘယ်သူမှ မမြင်အောင် သီးသန့်ထားတာ အကောင်းဆုံးလဲ ဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
သင့်ရဲ့မွေးနေ့အပြည့်အစုံ၊ သင့်နာမည်အပြည့်အစုံ ဒါမှမဟုတ် နေရပ်လိပ်စာ လိုမျိုး ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်တွေ အလွန်အကျွံ မျှဝေတာက သင့်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ခိုးတဲ့ သူတွေက သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုယူပြီး တခြားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။
သူတို့တွေက သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေသုံးပြီး သင်အဖြစ် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဟန်ဆောင်လို့ရပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တခြားသူတွေကို အန္တရာယ်တွေ၊ အနှောင့်အယှက်တွေ ပေးတဲ့သူတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ သင်တက်နေတဲ့ ကျောင်းလိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ အိမ်လိပ်စာတွေကို လူတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့ ပုံစံ (Public) နဲ့ ဘယ်တော့မှ မထားပါနဲ့။
သင့်လူမှုမီဒီယာအကောင့်မှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာ (privacy setting) ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။ ဘယ်အရာတွေကို အများမမြင်အောင်ထားပြီး ဘယ်အရာတွေက လူတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့ပုံစံ (Public) နဲ့ ထားမယ်ဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင့်မှာ လူမှုမီဒီယာအကောင့်တွေ ရှိတယ်ဆိုရင် သင် တင်ခဲ့၊ share ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကို စဉ်းစားပါ။ သင့်အကြောင်းတွေကို အလွန်အကျွံ တင်ထား၊ share ထားတယ်ထင်ရင် ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ အချက်အလက်ထိန်းချုပ်မှု (privacy setting) ကို ပြန်ချိန်ညှိပါ။ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက် တချို့ကို ဖယ်လိုက်ပါ။
Privacy Settings – ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ထိန်းချုပ်မှု
Facebook နဲ့ Instagram လိုမျိုးလူမှုမီဒီယာ အက်ပ် (App) တွေက သင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ (Privacy setting) ကို ကြည့်ခွင့် ပြောင်းခွင့် ပေးထားခြင်းဖြင့် သင့်ကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လုံခြုံစွာနေခွင့်ရစေပါတယ်။ သင့်သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ တခြားသူတွေကို မြင်ခွင့်ပေးမှာလဲဆိုတာကို Privacy setting ကနေ သင်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်။
အက်ပ်ပေါ်မှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ (Privacy setting) တွေက အသုံးပြုမှုပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်သင့်တဲ့ အဓိက ရွေးချယ်စရာတွေကတော့
သင် ပို့စ်တင်လိုက်တာတွေကို လူတိုင်းမြင်စေချင်တာလား၊ သင့်သူငယ်ချင်း တွေကိုပဲ မြင်စေချင်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူ့ကို မှ မမြင်စေချင်တာလား ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။
ဘယ်သူတွေကပဲ သင့်ကို သူငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့်တောင်းဆိုလို့ရလဲ ဆိုတာ ရွေးလို့ရတယ်။
ရှာဖွေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဖွင့်/ပိတ်လုပ်နိုင်တယ်။ တချို့ အက်ပ်တွေက အီးမေးလ် လိပ်စာ(သို့) ဖုန်းနံပါတ်သုံးပြီး တခြားလူတွေကို ရှာလို့ရအောင် ခွင့်ပြု ထားတယ်။
တည်နေရာပြပုံစံ (location setting) ကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ အက်ပ် တွေက အသုံးပြုသူတွေကို သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်မှာရှိနေလဲ ဆိုတာကို ရှာခွင့် ပေးထားတယ်။ အဲလို လုပ်နိုင်ခြင်းက အရမ်းအန္တရာယ် များပါတယ်။ သူစိမ်း တွေက သင်ဘယ်မှာရှိနေလဲ၊ ဘယ်ကျောင်းသွားလဲ ဆိုတာကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ တည်နေရာပြ ပုံစံကို ပိတ်ထားပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
သင် သိထားရမှာက သင့်လူမှုမီဒီယာအကောင့် အမျိုးမျိုး ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ (Privacy setting)ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားပြီးပြီ ဆိုရင်တောင် privacy setting ကိုပုံမှန် update လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Facebook နဲ့ Twitter လိုမျိုး အက်ပ်တွေက သူတို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူများလာတာ၊ ပိုကြီးလာတာနဲ့အမျှ သူတို့ရဲ့ privacy setting တွေကို ပုံမှန်ပြောင်းတတ်ကြပါတယ်။
သူတို့ ဘက်ကအပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်လိုက်တိုင်း သင့်ဆီကို အကြောင်းကြားပေးပြီး သင့်ရဲ့ privacy settingကို အသစ်ပြောင်းဖို့ သတိပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့သိထားရမှာသင် privacy setting တစ်ခေါက်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းက တစ်သက်စာ သတ်မှတ်ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။
သင်ယုံကြည်ရတဲ့လူကြီးတစ်ဦးနဲ့ အတူထိုင်ပြီး သင်အသုံးပြုနေတဲ့ အက်ပ်တွေ အကောင့်တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ (Privacy setting) တွေကိုကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေ ပိုမိုလုံခြုံ စိတ်ချရအောင် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပြုပြင်ပါ။
QR code – ကျူအာကုဒ်
ကျူအာကုဒ် (QR code) ဆိုတာ ဂျပန်နိုင်ငံက ပထမဆုံးပုံစံထုတ်ရေးဆွဲခဲ့သည့် စကန် (scan) ဖတ်လို့ရတဲ့ ဘားကုဒ် (Bar code) ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအမှတ်အသားကို စကန် ဖတ်လိုက်ရင် သူနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို တွေ့မှာပါ။ ဥပမာ- ခရီးသွား လက်မှတ်မှာပါတဲ့ QR code ကို စမတ်ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် တခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့ စကန် လုပ်တဲ့အခါ ခရီးအတွက် ဘွတ်ကင်တင်ထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဖတ်လို့ရပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် တော်တော်များများနဲ့ ကြော်ငြာလုပ်ငန်း တွေမှာ အသေးစိတ် သတင်းအချက်အလက်တွေကို လူတွေဆီကို တိုက်ရိုက်ရောက်အောင်လို့ QR code ကို သုံးလေ့ ရှိပါတယ်။
Recovery – ပြန်လည်ပြုပြင်တည့်မတ်နိုင်ခြင်း
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အမှား ဒါမှမဟုတ် မဖြစ်စေချင်တာ တစ်ခု ဖြစ်သွားပြီးဆိုရင် ဘယ်လို ပြန်လည် ပြုပြင်တည့်မတ်နိုင်မလဲ ဆိုတာသင်ယူဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲလိုလုပ်နိုင်မှသာ သင့်အနေနဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်လောကမှာ ပျော်ရွှင်စွာ ပြန်နေနိုင်မှာ ဖြစ်သလို အွန်လိုင်းလောက က ပေးတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်မှာပါ။ ပြန်လည်တည့်မတ်နိုင်ခြင်း က ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာတွင်ကျင်လည်မှု ရှိခြင်းရဲ့ အဓိကကျတဲ့ အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
သိထားရမဲ့ အဓိကကျတဲ့ အချက်အချို့ကတော့
တကယ်လို့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သင့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာ၊ စိုးရိမ်ကြောက်လန့် စေ တာတွေ ကြုံတွေ့လာခဲ့ရင် သင်ယုံကြည်ရတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ကို အမြဲပြောပြပါ။
ဘယ်လို အနိုင်ကျင့်မှုမျိုးမဆို၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုမျိုးမဆို သင်ယုံကြည်ရတဲ့လူကြီးကို အသိပေးပါ။ ဒါမှ သူက သင့်ကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်က တစ်ခုခုကို ပို့စ် လုပ်လိုက်တယ်၊ ပြီးမှ မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ သတိထားမိသွားတယ်ဆိုရင် ချက်ချင်း ပြန်ဖျက်သင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်က သင့်သူငယ်ချင်းရဲ့ ပုံတစ်ပုံ တင်လိုက်တယ်။ အဲဒီပုံက သူ့ကို စိတ်ထိခိုက်စေတယ် ဆိုရင် ပြန်ဖြုတ်ချပြီး ပြန်တောင်းပန် သင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်က သင့်လျှို့ဝှက်စကားလုံးကို တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပြောပြလိုက် မိတယ် ဆိုရင် လျှို့ဝှက်စကားလုံးကို ပိုကောင်းမွန်ပြီး ပိုမို စိတ်ချရတဲ့ တစ်ခု ပြန်ပြောင်း သင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ အကောင့်အားလုံးရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ (Privacy setting) နဲ့ တည်နေရာပြပုံစံ (location setting)တွေကို စစ်ဆေးပါ။ သင့်အကောင့်တွေ အားလုံး လုံခြုံမှုရှိနေတာ သေချာပါစေ။ သင်ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို သင်ဘယ်သူတွေနဲ့ မျှဝေနေလဲ၊ ဘယ်သူတွေတွေ့မြင်နိုင်လဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အမှားပြုလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်ကိုပြန်စဉ်းစားပါ။ အဲလို အမှားမျိုး နောက်တခါ ပြန်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုရှောင်မလဲဆိုတာ ချမှတ်ထားပါ။
Reporting – တိုင်ကြားခြင်း
သင်အသုံးပြုနေတဲ့ ဘယ်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုမျိုးမှာမဆို ထိခိုက်စော်ကားခြင်း၊ အလွဲသုံးစား လုပ်ခြင်းတွေကို ဘယ်လိုတိုင်ကြား (report) ရလဲဆိုတာ အဖြေရှာထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် တော်တော်များများက အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ထိခိုက်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ တင်တဲ့ share တဲ့သူတွေကို report လုပ်နိုင်မယ့် နေရာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ လူမှုမီဒီယာ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ စော်ကား တိုက်ခိုက်တဲ့ပို့စ်တွေ ဒါမှမဟုတ် အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ ပို့စ်တွေ ကို report လုပ်ရင် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေးပို့ စိစစ်ထိန်းသိမ်းသူတွေကို ခန့်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
သင်ယုံကြည်ရတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့ အတူထိုင်ပြီး သင်အသုံးပြုနေတဲ့ အက်ပ်တွေ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကနေ စော်ကားတိုက်ခိုက်မှု အတွက် ဘယ်လို report လုပ်ရလဲ ဆိုတာကို အဖြေရှာကြည့်ပါ။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အဆင့်တွေကို ချရေးထားခြင်းဖြင့် တကယ်လို့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အမှားတစ်ခု လုပ်မိရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိနိုင်မှာပါ။ မှားနိုင်တဲ့ အွန်လိုင်းဖြစ်ရပ် အမျိုးမျိုးအတွက် ပြန်လည်ပြုပြင်တည့်မတ်နိုင်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေစဉ်းစားထားပါ။
Risky – ဆုံးရှုံးထိခိုက်နိုင်ခြေရှိသော
ဆုံးရှုံးထိခိုက်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အပြုအမူ ဆိုတာက အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ထိခိုက်နစ်နာ စေနိုင်တဲ့ အပြုအမူကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှာတော့ ဆုံးရှုံး ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သူစိမ်းတွေဆီက မက်ဆေ့ချ် ရရှိတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေ မျိုး ကိုဆိုလိုတာပါ။ သူစိမ်းတွေဆီက ဆက်သွယ်လာမှု တိုင်းကိုတော့ အန္တရာယ်များတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး ဒါပေမဲ့ ခိုက်နစ်နာတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းကို ဦးတည်နေတဲ့ အတွက် အန္တရာယ်များ တယ်လို့ ပြောတာပါ။ အရေးကြီးဆုံးက အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို သူစိမ်းတွေနဲ့ မမျှဝေမိအောင် ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။
Scam – လိမ်လည်ခြင်း၊ အယောင်ဆောင်ခြင်း
တချို့လူတွေက အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ တခြားသူကို တစ်ခုခု ပြုလုပ်ချင်အောင် လှည့်စားတာ၊ လိမ်တာ လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ အဲလို လိမ်လည်မှုတွေမှာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ပေးလာအောင် ဒါမှမဟုတ် ပိုက်ဆံရအောင်ကြိုးစားတာတွေ တောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တွေကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေလိမ်လည်ရယူတာ ကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ဆိုတာ ဒီသင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်က လိမ်လည်ခြင်းတွေကို ဘယ်လိုသတိထားနိုင်မလဲဆိုတာ နဲ့ အလိမ်အညာမှန်းသိစေတဲ့ သဲလွန်စ ကို ဘယ်လိုရှာနိုင်လဲ ဆိုတာ သင်ယူဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Screenshot – စကရင်ရှော့ရိုက်ခြင်း
စကရင်ရှော့ (screenshot) ကို screen capture လို့လဲသိကြပါတယ်။ စကရင်ရှော့ လုပ်လိုက်တယ် ဆိုတာ စကရင်မျက်နှာပြင်ပေါ် ပေါ်နေတဲ့ ရုပ်ပုံကို ဓါတ်ပုံရိုက်သလို သိမ်းယူလိုက်တာကို ဆိုလို တာပါ။ စကရင်ရှော့ လုပ်တာကို စမတ်ဖုန်းအပါအဝင် ပစ္စည်းတော်တော်များများ မှာလုပ်လို့ ရပါတယ်။ ထရိုး (troll) လုပ်ရန်စတာ ဒါမှမဟုတ် အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မက်ဆေ့ချ်တွေကို သက်သေအနေနဲ့ သိမ်းထားဖို့လိုရင် စကရင်ရှော့ထား လို့ရပါတယ်။
Screenshot ရိုက်ခြင်းက ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အရာလို့လဲ စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်တင်ထား တဲ့ပုံတွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပျောက်သွားမယ်လို့ထင်ပေမဲ့ လူတွေက သင်တင်ထားတဲ့ ပုံတွေ ကို စကရင်ရှော့ နဲ့ပွားထားလို့ရတဲ့အတွက်ပါ။ တချို့အက်ပ်တွေမှာ သင်တင်ထားတဲ့ ပုံတွေက တင်ပြီး ၂၄ နာရီကျော်ရင် သူ့အလိုလိုပျောက်သွားမယ် ဆိုတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါပါတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာ သတင်းအချက်အလက်ကူညီရှာပေးနိုင်တဲ့ ယန္တရား (search engines) ဆိုတာရှိ ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အဓိက စကားလုံး (key words) တွေ ရိုက်လိုက်တာနဲ့ သင်ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် စာရင်း ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ သင်ကြားဖူးပြီးသား Yahoo နဲ့ Bing တို့လို search engines တွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာ နာမည်အကြီးဆုံး search engine ကတော့ Google ဖြစ်ပါတယ်။ Google ကနေပြီး နှစ်စဉ် ကမ္ဘာတဝှမ်း ရှာဖွေမှုပေါင်း သန်းတစ်သောင်း ပြုလုပ် ပေးနေရပါတယ်။
Selfie – ဆယ်ဖီရိုက်ခြင်း
ဆယ်ဖီရိုက်ခြင်းဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဓါတ်ပုံပြန်ရိုက်တာပါ။ စမတ်ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် ဝက်ဘ်ကင်မရာ (web camera) ကနေတဆင့် ရိုက်လေ့ရှိပြီး လူမှုမီဒီယာပေါ် တင်ကြပါတယ်။
Snapchat ဆိုတာ ဓါတ်ပုံပေးပို့တာတွေ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဇာတ်လမ်း(stories) ဖန်တီးတာတွေ လုပ်နိုင်တဲ့ မာလ်တီ မီဒီယာ အက်ပ် (multimedia app) ကို ပြောတာပါ။
Snapchat ပေါ်မှာ သင်လုပ်နိုင်တာတွေကတော့
Snaps (ဓါတ်ပုံ (သို့) ၁ဝ စက္ကန့်ကြာ ဗီဒီယိုလေး) တွေပို့နိုင်တယ်။
ကိုယ်ပိုင် snapchat ဇာတ်လမ်းဖန်တီးလို့ရတယ်။( အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ၂၄ နာရီ အထိ ခံပါတယ်)
မိမိ မိုဘိုင်းဖုန်းအဆက်အသွယ်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေရှာနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကို filter တွေသုံးပြီး ပျော်စရာနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဖြစ်အောင် ပြုပြင်လို့ရတယ်။
အက်ပ် ရဲ့ မက်ဆေ့ချ်ပို့လို့ရတဲ့နေရာကနေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောလို့ရတယ်။
Snapchat နေတဲ့ သူငယ်ချင်းဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကို Snap မြေပုံသုံးပြီး ရှာလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့အက်ပ် ကိုသုံးနေတဲ့အချိန် သင့်လုံခြုံရေးအတွက် တည်နေရာပြပုံစံ( location setting)ကို ပိတ်ထားမယ်ဆိုလဲရပါတယ်။
Social media – လူမှုမီဒီယာ
လူမှုမီဒီယာဆိုတာ သတင်းအချက်အလက်တွေ အကြောင်းအရာတွေ ဖန်တီးနိုင်၊ မျှဝေနိုင်ပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးတွေ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဒါမှမဟုတ် အက်ပ် (App) တွေကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ လူမှုမီဒီယာတွေ ကတော့ Facebook, Twitter, Instagram နဲ့ Snapchat တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Streaming – တိုက်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုခြင်း
တိုက်ရိုက်နားဆင်ကြည်ရှုခြင်း (Streaming) ဆိုတာ သီချင်းတွေ ဗီဒီယိုတွေကို သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း၊ တက်ဘလက် တွေထဲမှာ နောက်မှ ပြန်ကြည့်လို့ရအောင် ဒေါင်းလုပ် ဆွဲထားမဲ့ အစား အွန်လိုင်းပေါ် ကနေ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ တိုက်ရိုက် သီချင်းနားထောင်တာ ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ရှင်ကြည့်တာကိုပြောတာပါ။
တိုက်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုဖို့ အတွက်ဆိုရင် အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီဖြစ်နိုင်ဖို့ မြန်ဆန်တဲ့ အင်တာနက် လိုအပ်ပါတယ်။ အင်တာနက် ဗီဒီယိုတွေ၊ အခမ်းအနား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့မရပဲ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရတာပါ။
တချို့ streaming လုပ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက တရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ တရားဝင် မဟုတ်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ ကနေ ရုပ်ရှင်နဲ့ သီချင်းတွေကို တရားမဝင် ကြည့်ရှုနားဆင် လို့လည်းရပါတယ်။ အဲဒီ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေက ရုပ်ရှင်ရုံမှာ လက်ရှိပြနေတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ ဒါမှမဟုတ် အားကစားပွဲတွေကို တိုက်ရိုက်ပြန်ပြီး လွှင့် ပေးတာမျိုးပါ။ အဲဒီ stream တွေက ဗီဒီယို အရည်အသွေး မကောင်းတာ ဖြစ်နိုင်သလို တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကနေ stream တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက မယုံကြည်ရတဲ့ pop-up ကြော်ငြာတွေနဲ့ လင့်ခ် တွေပါတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကြော်ငြာနဲ့ လင့်ခ်တွေမှာလည်း ဗိုင်းရပ်စ် တွေပါတတ်ပြီး သင်အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်းနဲ့ တက်ဘလက်စတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
Trolling – ထရိုး ခေါ် ရန်စခြင်း
ကံဆိုးချင်တော့ အပြင်လောက မှာလိုပဲ တချို့လူတွေက အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ညှာတာထေက်ထားမှု ကင်းမဲ့ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ မက်ဆေ့ချ်တွေ ပို့တာ မခက်ခဲသလို ဘယ်သူ ပို့တာလဲ ဆိုတာ မသိအောင်လည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲလို ရိုင်းစိုင်းတဲ့မက်ဆေ့ချ်တွေ ပို့တတ်တဲ့ လူတွေကို အင်တာနက် ထရိုးသူများ (internet trolls) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်က လူတွေကို ရန်စလိုခြင်းနဲ့ စိတ်ထိခိုက်စေလိုခြင်း ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ရိုင်းစိုင်းပြီး ဒေါသနှိုးဆွတဲ့ စာတွေ ရေးတဲ့အပြုအမူကို trolling လို့ခေါ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ် ထရိုးတယ် ဆိုတာ တခြားလူတွေကို ဒေါသဖြစ်အောင် ဝမ်းနည်းအောင် ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခု တုံ့ပြန်လာအောင် ရည်ရွယ်ပြီး စော်ကားပုတ်ခတ်၊ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ မက်ဆေ့ချ်တွေ ကောမန့် တွေ တမင်သက်သက် ရေးတဲ့အပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေ ထရိုး လုပ်တဲ့သူတွေက သူတို့ တခါမှ မတွေ့ဖူးတဲ့ နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပစ်မှတ်ထား ကြပြီး ကောမန့် တွေရေးကြပါတယ်။ အဲလိုရေးတာဟာ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ တခြားသူ တွေနဲ့ စကားအခြေအတင်တွေ၊ အငြင်းအခုန်တွေလုပ်နိုင်အောင်လို့ပါ။ တစ်ခါတလေ သူတို့တွေက နာမည်မဖော်ပြပဲ သော်လည်းကောင်း တခြားတစ်ယောက် ဟန်ဆောင်ပြီး သော်လည်းကောင်း ထရိုး ကြပါတယ်။
သင် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ troll ခံရရင် သူတို့ကိုမတုံ့ပြန်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ သူတို့လိုချင်တာက တုံ့ပြန်မှုပါ။ သူတို့က တိုက်ခိုက်တာ၊ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတာတွေ လာပြောရင် သူတို့ကို block နဲ့ report လုပ်လိုက်ပါ။ သင်ယုံကြည်ရတဲ့လူကြီးကို ပြောပြပါ။ ဒါမှ သူကသင့်ကို ကူညီ နိုင်မှာပါ။
အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ မက်ဆေ့ချ်တွေ ရတဲ့အခါ ဝမ်းနည်းတာ၊ ဒေါသထွက်တာ တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲလို မက်ဆေ့ချ်ပို့တဲ့သူတွေကို လည်း ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း တုံ့ပြန်ဖို့လိုတယ်လို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့့ အဲလိုလုပ်တာက အခြေအနေတွေကို ပိုဆိုး စေပါတယ်။ ရိုင်းစိုင်းတဲ့၊ ညှာတာထောက်ထားမှု မရှိတဲ့ မက်ဆေ့ချ်တွေပို့တဲ့သူတွေ က တုံ့ပြန်မှု လိုချင်လို့လုပ်တာပါ။ သူတို့ကို သင်က တုံ့ပြန်လိုက်မယ်၊ သူတို့ အငြင်းပွားမှုထဲ ဝင်လိုက်မယ် ဆိုရင် သူတို့လိုချင်တဲ့ အတိုင်း သင်လုပ်လိုက်မိတာ အသေအချာပါပဲ။
တုံ့ပြန်မှု အစား ဘာလုပ်ရမလဲ
ရိုင်းစိုင်းတဲ့ မက်ဆေ့ချ်တွေရတဲ့အခါ သင်ယုံကြည်ရတဲ့ လူကြီးကိုပြောပြပါ။ ဒါမှသာ သူက သင့်ကိုကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဝက်ဘ်ဆိုက် ဒါမှမဟုတ် အက်ပ် မှာပါတဲ့ လုံခြုံရေး ကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီး အဲဒီလူကို block နဲ့ report လုပ်ပါ။
မက်ဆေ့ချ်တွေကို သက်သေအဖြစ်ပြနိုင်အောင် မသိမ်းဆည်းရသေးပဲ မဖျက်ပစ်ပါနဲ့။
Trolling ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ရိုးရှင်းစွာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါ။ အနည်းဆုံးတခြား တစ်ယောက်ကို ရှင်းပြပါ။ သင့်မွေးချင်းမောင်နှမ ဒါမှမဟုတ် မိဘလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်း trolling နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အထားမြင်ဖူးပါသလား။ သင်ဘယ်လိုတုံံ့ပြန်ပါသလဲ။
တွစ်တာ (Twitter) ဆိုတာ အသုံးပြုသူတွေက တွိ (Tweets) လို့ခေါ်တဲ့ မက်ဆေ့ချ် အတိုလေးတွေ တင်ပြီး သူတို့ လက်ရှိဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာ အားလုံးကို အသိပေးနိုင်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်မျိုးပါ။
စာလုံးရေ ၂၈ဝ နဲ့ အောက် မက်ဆေ့ချ်ရေးလို့ရတယ်။
တခြားတွစ်တာ အသုံးပြုသူတွေကို follow လုပ်လို့ရတယ်။
ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို နဲ့ GIFs (လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံ) တွေ တင်လို့ရတယ်။
တခြားလူတွေရဲ့ မက်ဆေ့ချ်(tweet) တွေကို ပြန် tweet လို့ရတယ်။ အဓိပ္ပါယ်က တခြားသူ တွေရဲ့ မက်ဆေ့ချ်ကို ပြန်မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် သင့် follower တွေပါ မြင်ရပါတယ်။
Periscope ကိုသုံးပြီး live လွှင့်တာ၊ live ကြည့်တာတွေလုပ်နိုင်တယ်။
Two-step verification – အဆင့် (၂) ဆင့် စစ်ဆေးမှုပုံစံ
အဆင့် (၂) ဆင့် စစ်ဆေးမှုပုံစံဆိုတာ WhatsApp ဒါမှမဟုတ် Facebook တွေလို အွန်လိုင်း အကောင့်တွေမှာ ရွေးချယ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ လုံခြုံရေးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အက်ပ်တွေရဲ့ setting ထဲမှာရှာပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။
အဆင့်(၂)ဆင့် စစ်ဆေးမှုပုံစံကိုသုံးတာ သင့်အနေနဲ့ နောက်ထပ် လုံခြုံရေးအဆင့်တစ်ခု ထပ်ထည့်လိုက်တာပါ။ အဆင့် (၂) ဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ သင့်အကောင့်ထဲ ဝင်လို့ရမှာပါ။ အခန်းတစ်ခန်းထဲ မဝင်ခင် အမျိုးအစား မတူတဲ့ သော့နှစ်ချောင်းရှိတဲ့ တံခါး (၂) ပေါက်ကို ဖွင့်ရသလိုမျိုးပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင်မသိပဲ သင့် လျှို့ဝှက်စကားလုံးကို ရသွားရင်တောင်မှ သင့်အွန်လိုင်း အကောင့်ကို အဆင့်(၂)ဆင့်လုံးဖြတ်ပြီးဝင်လို့ရမှာ မဟုတ်လို့ အသုံးဝင်ပါတယ်။
တချို့အွန်လိုင်းအကောင့်တွေ သုံးတတ်တဲ့ အဆင့်(၂)ဆင့် စစ်ဆေးမှုပုံစံ ဥပမာတွေကတော့
အဆင့် ၁ – သင့်အကောင့်ရဲ့ လျှို့ဝှက်စကားလုံးရိုက်ထည့်ပါ။ (သင်သိထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ)
အဆင့် ၂ – လျှို့ဝှက် သင်္ကေတ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် (system ကအလိုအလျောက် ထုတ်ပေးပြီး သင့်ဖုန်းထဲပို့ပေးသည့်နံပါတ်) ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
အဆင့်(၂)ဆင့် စစ်ဆေးမှုပုံစံကို လေ့လာကြည့်ပြီး အနည်းဆုံး အကောင့်တစ်ခုကို တခြားလူတွေ အလွယ်တကူ မဝင်ရောက်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားကြည့်ပါ။
သင် Musical.ly ဆိုတဲ့ app ကိုကြားဖူးမှာပါ (ကာရာအိုကေပလက်ဖောင်းပုံစံတမျိုးလို့ တွေးကြည့်ပါ)
Tik Tokဆိုတာက နာမည်အသစ်ဖြစ်ပြီး app ကို ပိုမိုအဆင့်မြင့်ထားကာ သုံးစွဲ သူတွေကို ၃ စက္ကန့် ကနေ စက္ကန့် ၆၀ ကြာ video အသေးစား‌လေးတွေကိုတင်ခွင့်၊ ကြည့်ခွင့်၊ ဖန်တီးခွင့်ပေးထားတဲ့ app တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Musical.ly မှ Tik Tok သို့
မကြာသေးမီအချိန်အထိ လူသန်းပေါင်းများစွာက Musical.ly ကနေ သီချင်းသီဆိုခြင်း၊ အကကခြင်း၊ ဟာသတွေတင်နေကြပါသေးတယ်။
ဩဂုတ်လ ၂ ရက် ၂၀၁၈ တွင် Musical.ly က ပိုမိုကြီးမားပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဗီဒီယို အသိုင်းအဝိုင်းကိုဖန်တီးဖို့ TikTok နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ Musical.ly အသုံးပြုသူများသည် TikTok သို့အလိုအလျောက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။
TikTok သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွင်း ဒေါင်းလုတ်ပေါင်းတစ်သန်းဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒေါင်းလုတ် အများဆုံး ပြုလုပ်ခဲ့ရသည့် အက်ပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌ Tik Tok သုံးစွဲသူသန်း ၅၀၀ ကျော်ရှိသည်။
Tik Tok ဆို‌တာဘာလဲ။
Tik Tokအသုံးပြုသူတွေသည် မိုဘိုင်းအက်ပ်ကနေ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် ဗီဒီယို အတိုလေးတွေပြုလုပ် နိုင်သလို ရှိပြီးသား သီချင်းတွေနဲ့လဲ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေက ဒီဗီဒီယိုတွေကို ဖန်တီးတည်းဖြတ်လို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းရှိကြပါတယ်။
တခြား Tik Tok အသုံးပြုတွေကလည်းရှိပြီးသားဗီဒီယိုတွေရဲ့ဘေးမှာကိုယ်ပိုင် ဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီး “တုံ့ပြန်မှု” (react) ပေးလို့ရသလို ရှိပြီးသားဗီဒီယိုတစ်ခု‌ ဘေးဘက်မှာဗီဒီယိုထပ်ထည့်ပြီး “စုံတွဲဖျော်‌ဖြေ” (duet) လို့ရပါတယ်။
Rain control challenge မှာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုတဲ့ဥပမာတစ်ခုကို ပြသပါမယ်။
Tik Tok က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
အသက် ၁၃ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများသည် app များတွင် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည့် application ကို app store မှ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားအသက်အရွယ်ကန့်သတ်ထားသောပလက်ဖောင်းများတွင်မူမိဘများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ကလေးများသည် TikTok ကိုအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောအသက်အရွယ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်တယ်။
TikTok အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးနောက်သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဗွီဒီယိုများကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအသုံးပြုသူများဖန်တီးထားသော အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ခြင်း စသည်တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။။
ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများက အမျိုးအစားမျိုးစုံဖြစ်ပြီး အနုပညာ၊ ဟာသ၊ အားကစား၊ အစားအစာ၊ ခရီး၊ ဂီတနှင့်ဂိမ်းများဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့နှစ်သက်သော အကြောင်းအရာများနှင့် အလားတူသည့် ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
သုံးစွဲသူများသည် အပတ်တိုင်းအသစ်တင်သည့် စိန်ခေါ်မှု (challenges) များတွင် ‘Discover’ခလုတ် ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် hashtag # စိန်ခေါ်မှုများတွင်ပါ ၀င်နိုင်တယ်။ မတူညီသော effects များ၊ filters များ နှင့် စတစ်ကာများကိုရွေးချယ်ပြီး ဗီဒီယိုများဖန်တီးခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းကို လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူများသည် Instagram သို့မဟုတ် Facebook ကဲ့သို့သော အခြားလူမှုမီဒီယာ ပလက်ဖောင်းများပေါ်မှာ ဗီဒီယိုများကိုအလွယ်တကူမျှဝေနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတင်းများနှင့် following ကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူတွေက Tik Tok ရဲ့ လူအများလိုက်နာရန်လမ်းညွှန်ချက် (community guidelines) တွေကိုဖတ်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ (privacy settings) တွေရောရှိပါသလား။
‌ဒီ app ဟာအရင်က ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ မရှိတဲ့အတွက် ဝေဖန်ခံခဲ့ရသော်လည်း အခုဆိုအသုံးပြုသူက သူတို့အကောင့်ကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လျှို့ဝှက် ထိန်းသိမ်းမှု ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ မိမိ ဗီဒီယိုတွေကို ဘယ်သူတွေက ကောမန့် (သို့မဟုတ်) ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိပါတယ်။ အသုံးပြုသူအနေနဲ့ အခြားအသုံးပြုသူတွေကိုဘလော့ (block) လုပ်လို့ရပါတယ်။ TikTok မက်ဆေ့ချ်တွေက အမြဲတမ်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်း ထားပြီး သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းသာ မက်ဆေ့ချ်ပို့လို့ရပါတယ်။
မကြာသေးမီကပဲ Tik Tokက လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး အသုံးပြုသူက သူတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ စကားလုံးအလုံး၃၀ကို အသုံးပြုကာ ကောမန့်တွေကို စိစစ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကိုရွေးချယ်ထားမယ်ဆိုရင် အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ သူတို့ဗီဒီယိုတွေအောက်မှာ မနှစ်မြို့ဖွယ် (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်စေတဲ့ ကောမန့်တွေ ဘယ်သူမှ လာရေးလို့မရအောင်တားဆီးနိုင်ပါသည်။
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကို screen ရဲ့ညာဘက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ အစက်သုံးစက် ထဲရှိ “ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းခြင်း” ဆိုတဲ့ဆီမှာရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Tik Tokရဲ့လုံခြုံရေးဗီဒီယိုတွေကို @tiktoktips မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Screen time ဆိုတာဘာလဲ။
မိဘများအနေဖြင့် မိမိတို့ကလေးတွေကို TikTok ပေါ်မှာ တစ်နေ့လျှင် မိနစ် ၄၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀ စသည်ဖြင့် အ ချိန်ဘယ်လောက်ကုန်ဆုံးစေမှာလဲဆိုတာ စီမံလို့ရပါတယ်။ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က လျှို့ဝှက်စကားလုံးဖြင့်ကာကွယ်ထားပြီ အသုံးပြုသူများက ကန့်သတ်ချိန်ရောက်ရှိသောအခါ ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘများအနေနဲ့ screen time ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ လျှို့ဝှက် စကားလုံး သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
TikTok မှာ ကြည့်ရှုမှုကန့်သတ်ခြင်းပုံစံလို့ဆိုတဲ့ အခြားထိန်းချုပ်မှုပုံစံရှိပြီး မိဘထိန်းချုပ်မှုပုံစံလိုမျိုး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၄င်းကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့ ပရိသတ်အားလုံးနဲ့ မသင့်တော်တဲ့အကြောင်းအရာ‌တွေကို ညှိနှိုင်းကန့်သတ်ပါလိမ့်မယ်။ အပေါ်က ဖော်ပြထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လိုပဲ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလဲ လျှို့ဝှက်စကားလုံးထားကာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးအနေနဲ့ Tik Tok ကို လုံခြုံစိတ်ချအောင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ။
သင့်ကလေးကိုလုံခြုံစိတ်ချနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေက app နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင် သိသမျှ ပြောပြပါ။၊အထူးသဖြင့် ၎င်း၏လုံခြုံရေးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လူနေမှုဘဝရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးက ဘာအတွက် အသုံးပြုသလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပြီး သူတို့ နှစ်သက်တဲ့အကြောင်း‌အရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပါ။
၂။ အကယ်၍ သင့်ကလေးက သူ့အကောင့်ကို လူတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ထားပါက၊ ဒါက အမှန်တော့ ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သေချာနားလည်ပါစေ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်းချုပ်မှုပုံစံ စိတ်ချရတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည့် သူတို့ရဲ့ အကြောင်းအရာများကို ကြည့်ခွင့်ပြုထားသော follower တွေကိုသာ မျှဝေခွင့်ပြုပါ။ ဘယ်သူတွေကိုတော့ သူတို့ကို follow လုပ်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း သေချာ ဆွေးနွေးပါ။ အကယ်၍ သူတို့မသိသောလူရဲ့ တောင်းဆိုမှုများကိုလက်ခံနေလျှင် ဒါက သင့်ကလေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ app ထဲရှိ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်နေရာ (profile tab) ကိုနှိပ်ပြီး သင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ညာအပေါ်ထောင့်ရှိ အစက် ၃ စက်ကိုနှိပ်ပြီး’Privacy and Safety’ ကိုနှိပ်ကာ ‘Private account’ ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်။
၃။ သင့်ကလေးက သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲ ဆိုတာသိဖို့ က အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဖော်ပြချက်မှာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်ဖြစ်တဲ့ နာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ် (သို့မဟုတ်) အသက် စတာတွေ မပါ၀င်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျောင်းဝတ်စုံများ (သို့မဟုတ်) တစ်စုံတရာတွက်သီးသန့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်၍ ဗွီဒီယိုများမရိုက်သင့်ကြောင်း၊ ဒါက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ ပေးသလိုဖြစ်ကြောင်း ကလေးတွေက သိနေပါစေ။ သူတို့ရဲ့ ဗီဒီယိုတွေမှာ တည်နေရာညွှန်ပြမှု ပါနေလား ဆိုတာသတိထားရပါမယ် အိမ်အပြင်ဖက်မှာလဲမရိုက်သင့်ပါဘူး။ ဒါက သင်ဘယ်မှာနေလဲဆိုတာ ဖော်ပြပြီးသားဖြစ်နေမှာမို့ပါ။
၄။ မသင့်လျော်သောအကြောင်းအရာတွေကို ဘယ်လို report လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သင့်ကလေး သိနေတာ သေချာပါစေ။ အကယ်လို့ အက်ပ်ပေါ်မှာ တစ်စုံတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ရှိပါက ယုံကြည်ရတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူနဲ့ ပြောသင့်ကြောင်းပြောပါ။ သင် သို့မဟုတ် သင့်ကလေးသည် ဗွီဒီယိုတစ်ခုကို report လုပ်ချင်ရင် ဗွီဒီယို၏ဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်ရှိ ‘share’ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ပြီးရင် report ကို နှိပ်ပြီး screen ပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်လုပ်ပါ။
အသုံးပြုသူတစ်ဦးအား report လိုပါက ၄င်းရဲ့ (profile) ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ထဲဝင်ပြီး ညာဘက် အပေါ်ထောင့်ရှိ အစက် ၃စက်ကိုကိုနှိပ်ပါ။ ‘Report’ ဟုခေါ်သောရွေးစရာတစ်ခု ပေါ်လာ လိမ့်မယ်။ ပြီးရင် screen ပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်လုပ်ပါ။
Unreliable – ယုံကြည်စိတ်ချ၍မရသော
တစ်စုံတစ်ခုက ယုံကြည်စိတ်ချလို့မရဘူး ဆိုတာ ယုံကြည်စရာ မကောင်းဘူး၊ အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလို တာပါ။ ဒီသင်ရိုးက ‘သတင်းအတု’ တွေကို ယုံကြည်စိတ်မချလို့မရတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေအဖြစ် ရည်ညွှန်းပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မြင်ရတဲ့ တချို့အရာတွေက ယုံကြည်စိတ်ချ လို့မရဘူး ဆိုတာကို ဘယ်လိုဖော်ထုတ် သိရှိနိုင်မလဲဆို တာ သင်ယူထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သတင်းအတု မှန်းသိနိုင်ဖို့ ဆိုတာ အမြဲတမ်းတော့မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ များသောအားဖြင့် သိသာထင်ရှားတဲ့ သဲလွန်စတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။
URL ဆိုတာ Uniform Resource Locator ရဲ့ အတိုကောက် စာလုံးဖြစ်ပါတယ်။ URL က အင်တာနက်ပေါ်က ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာ ကိုရည်ညွှန်းတာပါ။ တကယ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်က URL ရိုက်ဖို့ပြောလာရင် ဒါမှမဟုတ် လုံခြုံမှု ရှိမရှိ သေချာအောင် URL စစ်ကြည့်ဖို့ပြောတာဆိုရင် ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ – www.telenor.com.
URL ကို ဝက်ဘ်ဆိုက် လင့်ခ် (link) လို့လဲ ရည်ညွှန်းပါတယ်။ URL က နံပါတ်တွေအများကြီး၊ စာလုံးတွေအများကြီး ရောထွေးနေပြီး ကြည့်ရတာ ထူးဆန်းနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီ လင့်ခ် က တရားဝင် ဒါမှမဟုတ် စိတ်ချရတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
Virtual currency ကို virtual money လို့သိကြပါတယ်။ သူက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်မထားတဲ့၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ virtual currency ကို ဖန်တီးထားသူကသာ ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ ထုတ်ဝေခြင်းတွေပြုလုပ်နိုင်ပြီး သီးခြား ဒစ်ဂျစ်တယ်လောက မှာပဲ အသုံးပြု လက်ခံကြပါတယ်။
Vlog – ဗီဒီယို ဘလော့ဂ်
Vlog ဆိုတာ ဗီဒီယိုဘလော့ဂ် ကိုပြောတာပါ။ အရမ်းကို လူသိများ၊ ကျော်ကြားပြီး follower များတဲ့ vloggers တချို့ရှိပါတယ်။ နာမည်ကြီး vloggers တွေကတော့ နေထိုင်မှုပုံစံ၊ သီချင်းနဲ့ အလှအပရေးရာ အကြောင်းတင်ဆက်တဲ့ vloggers တွေဖြစ်ပြီး အချင်းချင်း ပံ့ပိုးမှုပေးတဲ့ လူတွေပါဝင်ပါတယ်။
WhatsApp (Viber ကဲ့သို့သော App ဖြစ်သည်။)
WhatsApp ဆိုတာ ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့လူတွေအချင်းချင်း အွန်လိုင်းကနေ မက်ဆေ့ချ် အပြန်အလှန်ပို့ လို့ရတဲ့ အက်ပ် ဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်စုဖွဲ့နိုင်ပြီး မက်ဆေ့ချ်၊ ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို နဲ့ ဖိုင်တွေ ပို့လို့ရပါတယ်။
ဆက်သွယ်သူအချင်းချင်း အပြန်အလှန် ရေးသားပြောဆို နိုင်တယ်။
တစ်ယောက်ချင်း မျက်နှာချင်းဆိုင် ဗီဒီယို ခေါ်လို့ရတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အသံနဲ့စကားပြောလို့ရတယ်။ ဖုန်းခေါ်သလိုမျိုးပါ။
WhatsApp ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသုံးပြီး ကွန်ပျူတာကနေတဆင့် အွန်လိုင်းမက်ဆေ့ချ်တွေ ပို့လို့ရပါတယ်။
Website – ဝက်ဘ်ဆိုက်
ဝက်ဘ်ဆိုက်ဆိုတာက ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ(web page) တွေကို နာမည်တစ်ခုအောက် မှာစုစည်းပေးထားတာကိုခေါ်တာပါ။ အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် တွေကတော့ အင်တာနက် ပေါ်ကတဆင့် ဝင်ကြည့်နိုင်ပြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဝန်ထမ်းတွေအတွက် သီးသန့် လုပ်ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက် လိုမျိုး ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေသာ ကြည့်နိုင်တဲ့ အင်ထရာနက် (intranet) ပေါ်ကတဆင့် ဝင်ကြည့်နိုင်မှာပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာ
ကုမ္ပဏီ ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ဥပမာ – telenor.com
ဘလော့ဂ် (blog)။ ဥပမာ – ဖက်ရှင်၊ခရီးသွားခြင်း၊ သတင်းများ နှင့် ဖျော်ဖြေရေး ဝက်ဘ်ဆိုက် များ
လူမှုမီဒီယာ ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ဥပမာ – com
YouTube ဆိုတာကဗီဒီယိုတွေမျှဝေလို့ရအောင် ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ website တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း မှာရှိတဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူတွေက ဒီ website မှာ အကောင့်ဖွင့်ကြပြီး အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ သူတွေက လူတိုင်းကြည့်နိုင်အောင်ဗီဒီယိုတွေတင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းရဲ့ မိနစ်တိုင်းမှာ ၃၅ နာရီကျော် ကြာတဲ့ ဗီဒီယိုကို YouTubeပေါ်သို့တင်ကြပါတယ်။
ဗီဒီယိုဖိုင်တွေက အရမ်းကြီးတာဖြစ်နိုင်ပြီး တခါတရံတခြားတစ်ယောက်ဆီကို အီးလ်မေးကနေပို့ဖို့ အရမ်းကြီး နေတာမျိုးလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါ ဗီဒီယိုပဲ share နိုင်သလို တစ်စုံတစ်ယောက် ကို URL link (လင့်ခ့်) လို့ခေါ် သက်ဆိုင်ရာ အင်တာနက် ပေ့ချ် ရဲ့ လိပ်စာ ကိုပို့ပြီး share လို့ရပါတယ်။
YouTube ရဲ့ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့
အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီး ၁၅မိနစ်အထိကြာတဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကို မိသားစုတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို share လို့ရတယ်။ ၁၅မိနစ်ကျော်ကြာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ အကောင့် verify လုပ်ထားရင်တင်လို့ရတယ်။ YouTube help page တွေမှာ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေရှိပါတယ်။
YouTubeတည်းဖြတ်နိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအသုံးပြုပြီး နောက်ခံတေးတွေ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖန်တီးလို့ရပါတယ်။
YouTube ရဲ့ privacy option တွေအသုံးပြုပြီး သင့်ဗီဒီယိုတွေကို ဘယ်သူတွေပဲမြင်လို့ရအောင် ကန့်သတ်လို့ ရပါတယ်။
ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး ဗီဒီယိုတွေကို ပြန်ရှာလို့ရပါတယ်။
ကိုယ်မကြည့်ဖြစ်လိုက်တဲ့ လွတ်သွားတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို 4oD, channel4playback channel ကဲ့သို့သော channel တွေကတစ်ဆင့်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်။
ကိုယ့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ကောမန့်တွေပေးလို့ရတယ်။
ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ ရုပ်ရှင်အပြည့် ကြည့်လို့ရတယ်။
YouTube ရဲ့ စာတမ်းထိုးလုပ်ဆောင်ချက်တွေအသုံးပြုနိုင်သလို 3D နဲ့ ကွာလတီအမြင့်ဖြင့် ကြည့်နိုင် ခြင်း စသည့် ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလဲသုံးနိုင်ပါတယ်။
Algorithms – အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်
Encryption – လျှို့ဝှက်သင်္ကေတပြောင်းခြင်း